Facebook အဟောင်းသို့ပြန်သွားပါ Gadget သတင်း
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးမားဆုံးလူမှုကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်အတူတူပင်ဖြစ်သည် Facebook ကမကြာသေးမီကအလွန်ပြောင်းလဲခဲ့သောဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မကြိုက်ပါ။ ဘဝ၏ပထမနှစ်တွင်ဒီဇိုင်း၏ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများကိုမနှစ်သက်သောမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုပြုလုပ်နိုင်သည် ထူးဆန်းတာ၊ စိတ်ဆိုးတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ interface ဟောင်းကိုပြန်သွားပါ.
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ယနေ့သုံးစွဲသူများသည် Facebook ဒီဇိုင်းသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရမည်၊ ၎င်းသည်လူမှုရေးကွန်ယက်ကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူအရေအတွက်အရအကြီးမားဆုံးဖြစ်လာစေသည့်ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်ညာဘက်အပေါ်ပိုင်း၌တွေ့ရသော link တစ်ခုဖြင့်လူမှုကွန်ယက်၏ဒီဇိုင်းဟောင်းကိုပြန်သွားနိုင်သည်, အရာ၏သင်တန်းယခုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Facebook ၏ရိုးရှင်းသောနှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကိုသူ၏ပထမ ဦး ဆုံးဘဝနှစ်များတွင်နှစ်သက်သူများအနက်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းခေတ်သစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုငါသိသည်ဟုပြောရမည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မနက်ဖြန်မှာသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပိုမိုလွယ်ကူတဲ့လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုသို့ပြန်သွားနိုင်ပြီးဒီနေ့ရှုပ်ထွေးစွာရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲပြန်သွားနိုင်ဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်ဟောင်းဒီဇိုင်းကိုပြန်သွားချင်ပါသလား။။ မှတ်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသောလူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်လည်းကောင်း၊ လက်နက်များဖြင့်သင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသောနေရာ၌လည်းကောင်းသင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပြန်သွားပါ
521 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
nuvia maria ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိပြီးမပြောင်းလဲတာပိုကောင်းတယ်၊
nuvia maria သို့ပြန်သွားရန်
ငါကချစ်ဖို့ကောင်းတယ် သင် link ကို နှိပ်၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းသို့သွားသောအခါသင်ပြုလုပ်လိုက်သောချိန်ညှိချက်များဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလျှင်၎င်းသည်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်သည်။
Marlon Manuel Valdes Bossio ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သူတို့ကဗားရှင်းအသစ်ကိုလုပ်တာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် Facebook ဟောင်းကိုပြန်သွားတာကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ရယ်စရာ
Marlon Manuel Valdes Bossio အားပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ ဗားရှင်းအဟောင်းကိုမည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အပေါ်ညာဘက်ရှိစာအုပ်မျက်နှာဟောင်းစာအုပ်သို့ပြန်သွားရန်ရွေးစရာကိုမတွေ့ပါ။ မင်းရဲ့အကူအညီကိုငါတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ် Salu2!
ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကတခြားတစ်ခုကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကတော့သူနဲ့မတူတော့ဘူး
ပြန်မူကွဲအဟောင်းကိုသွားကပြောပါတယ်ဘယ်မှာ link ကို
yaritza monrroy ဟုသူကပြောသည်
mmm ။ ဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်
ပိုပြီးလွယ်ကူသွားတယ်။ ငါပြန်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါမပေါ်ဘူး
ငါဖေ့စ်ဘွတ်အဟောင်းကိုပြန်သွားနိုင်ကပြောပါတယ်ဘယ်မှာ link ကို
yaritza monrroy အားပြန်ပြောပါ
sigrid lizana ဟုသူကပြောသည်
plisss ငါအဟောင်းကိုချင် !!!
sigrid lizana သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာဟောင်းသို့ပြန်ချင်သော်လည်း ၀ င်းဒိုးပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ဒီလင့်ဟာငါမပေါ်ဘူး။ အသစ်တစ်ခုဟာစက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတယ်။ ငါအရင်လုပ်ခဲ့တာကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ ??????
ငါအသစ်တစ်ခုကိုမကြိုက်ဘူးလား။ Facebook book ကိုမပိတ်ချင်ဘူးလား။ Windows ကိုမမြင်ရဘူးလား။
ဟိုင်း! ငါ session ရဲ့အစအလွန်အပူတပြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်နှင့်ထိုပုံရိပ်ကအရမ်းရုပ်ဆိုးဖြစ်ပြီးပျင်းစရာငါ့မျက်နှာဟောင်းကိုပိုနှစ်သက်! ဒါပေမယ့်ဒါကြောင့်မို့အရင်သင်ကိုက်သင့်တဲ့နေရာကိုငါမပေါ်လာပေမဲ့အခုမလုပ်ဘူး။ : S
ဗားရှင်းအသစ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမပြပါ။ သတင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အားအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်မြင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အခါမျှလက်ခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ အသစ်ကဒီဇိုင်းတောင်မှမရှိဘူး၊ လုံးဝရောဂါဖြစ်နေတယ်၊ ​​ဒီနောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာသူတို့တွေ့ရတာကိုငါကောင်းကောင်းမသိဘူး၊ ပင်မစာမျက်နှာနဲ့ပရိုဖိုင်းတွေအတူတူပါပဲ၊ အမှန်တရားကရုပ်ဆိုးတာထက်ပိုတယ်၊ ကောင်းစွာလမ်းကြားအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်သောအခြားဗားရှင်း ...
လီနာ Martinez ဟုသူကပြောသည်
ငါဘာမျှမလိုချင်ဘူး !!!!!!!! အသစ် Faceboook !!!!
ဒါ့အပြင်ပြတင်းပေါက်မှထွက်လာမdဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းသို့ပြန်သွားသည် !!!
lina martinez အားပြန်ပြောပါ
alvaro forero ဟုသူကပြောသည်
မျက်နှာဟောင်းသို့ပြန်သွားရန် ၀ င်းဒိုးသည်ထွက်မလာ။ S: S q စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်၊ !! dewvuelvanme !!!
alvaro forero အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်၏ Facebook Book Old Version သို့ပြန်သွားလိုပါသည်။ ငါ“ နောက်သို့ရှေ့သို့ပြောင်းလဲခြင်းသို့ပြန်သွား” ဟူသောလင့်ခ်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်မှီယခုပင်မရှိတော့ပါ!
VERCION အသစ်သည်စုစုပေါင်း GARCHA IS !!!!
ကျွန်တော့် Facebook Book Old Old Version ကိုပြန်သွားချင်တယ်။ ငါ "နောက်ကျောယခင်ဗားရှင်း" LINK ကိုပေါ်လာမီ, သို့သော်ယခုမဟုတ်တော့!
VERCION အသစ်ကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပါတယ်၊ ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး။
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်မသွားနိုင်တော့ပါ၊ ဗားရှင်းအသစ်သည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါသည် ... "ရှေ့သို့ကူးယူခြင်းသို့ပြန်သွားပါ" ဟူသောလင့်ခ်မရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်းအသစ်အားမကောင်းဟုထင်သူမဟုတ်ပါ။ ။
ehhh ငါနင့်ဖျားနာလို့လွင့်မျောနေတဲ့ဗားရှင်းအသစ်ရဲ့မှတ်ချက်ထဲမှာ "အရင် version ကိုပြန်သွားပါ" လို့မပြောခင်ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲ
ငါ aaaaaaaaaaaa တင်ငါရှေးဟောင်း version ကို urgenteeeeeee ချင်သောမည်သည့် link ကိုမရကြဘူး။
ဗားရှင်းအသစ်ဟာဆိုးဝါးလှတယ်၊ အဲဒါဟာရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်သက်ညှာမှုတစ်ခုပဲ။ အမှန်တရားကတော့ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး။
ကြောင်းသူကပြောတယ်ပြတင်းပေါက်ငါ့ထံသို့မပေါ်လာပါဘူးငါ Facebook အသစ်ကိုဖန်တီးသောသူတို့သည်အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်သောသည်အဘယ်သို့စုစုပေါင်းငါ၏အ Facebook ကို usssssss ချင်တယ်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ အဲဒါဟာအများကြီးပိုကောင်းတယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒါကိုထည့်လိုက်ရင်အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အရင်တုန်းကလိုလင့်ခ်ကိုအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့အကူအညီမပေးပါနဲ့ ဦး ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Idiots တွေကအသုံးပြုသူတွေအတွက်မဖြစ်မနေထည့်သွင်းထားလို့ပဲ။ ဒါကဆက်ရှိနေ ဦး မှာပဲ။
အတူတူပဲငါဆဲဆဲဗားရှင်းအသစ်ကိုစမ်းခဲ့တဲ့ xq nunk ဗားရှင်းဟောင်းရှိသေးတယ် .. ဒါပေမယ့်တနေ့ကျရင်သူတို့ကငါ့အပေါ်မှာအသစ်တစ်ခုတင်မယ်ဆိုတာသံသယမရှိဘူး !!
Old VERSIONAAAAAAAAA ကိုပြန်သွားပါ !! ဒါမှမဟုတ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့သုံးစွဲသူတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ် .. ဒီကနေ့သပိတ်မှောက်ကြပါစို့ !!!!!!!!!!!
krla ။ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ သူတို့ပြောတဲ့ tab ကမပေါ်လာဘူး၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
: အို Facebook ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်မရနိုင်ဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲဗားရှင်းအသစ်ကိုကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ပါ။ အဲဒီ link ကိုပြန်သွားဖို့တောင်တောင်မရပါဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ * - *
ငါ FcBooK အဟောင်းကိုလိုချင်တယ်။ ဒီဒီဇိုင်းသစ်ကိုငါမခံရပ်နိုင်ဘူး။ ကြောက်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ - ကျွန်တော့်ကို FaceBook အဟောင်းကိုပြန်ရောက်လာအောင်ကူညီပေးတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၀ န်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲရန် ၀ င်းဒိုးမရှိ၊ ၀ မ်းနည်းစရာများစွာကျန်ရှိနေသည်
အလေးအနက်ထားပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ applications တွေအားလုံးကိုအဲဒါကိုခွဲခြားရန်၊ ၎င်းတို့ကိုအမိန့်ထုတ်ရန်၊ ဗားရှင်းအသစ်အတွက်မြင်ကွင်းများကိုမြင်တွေ့ခွင့်နှင့်ချန်ထားရန်၊ အရာအားလုံးကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ရန်၊ သင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမပြုလိုပါကငါလုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးကိုရှုပ်ထွေးစေသည်!
တစ်စုံတစ်ယောက်ကဗားရှင်းအသစ်ကိုကြိုက်လျှင် - S
Cristian Garcia ဟုသူကပြောသည်
cristian garcia သို့ပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအခြေအနေများမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းစာမျက်နှာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာဟောင်းနှင့်မပါလျှင်သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမလိုချင်တော့ပါ ......
ငါ Facebook ဗားရှင်းအသစ်ကိုမုန်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝန်ပိနေသည်။ ကျွန်ုပ်ရှာနေသည့်အရာကိုမတွေ့ပါ။
Evelyn Luan ကိုပြန်ပြောပါ
ငါအသစ်က facebook ကို horribleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee လူဟောင်းဖြစ်ပါတယ် hateooooooooooooooooooooo ......... အဟောင်း facebook ကိုမှဘယ်လိုငရဲသို့ပြန်လာကြပါ
uichhhhhhhhhh ke malllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:
ထို့အပြင်ငါပြန်သွားနိုင်သည့်နေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်မည်သည့်ပြတင်းပေါက်လည်းမတွေ့ရပါ။ ၎င်းသည်စင်ကြယ်သော lieaaaaaaaaaaaa ဖြစ်သည်
ဗားရှင်းအသစ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ မျှော်လင့်ချက်များထက်မကျော်လွန်နိုင်ပါ။ အရာရာကိုကြည့်ရှုရန်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ပိုမိုရိုးရှင်းပြီးဖျော်ဖြေမှုအဆင်ပြေသည်။ လူများစွာကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ။
သုံးစွဲသူအသစ်များသည်လွယ်ကူစွာလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်သော်လည်းဟောင်းနွမ်းသောသူများသည်ဤစာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်စိတ်ဆန္ဒပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့သည်ထွက်ခွာကြလိမ့်မည်၊ တစ်ခုခုပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်၊
ဒါကိုညွှန်ကြားချက်များက ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသောထုတ်ကုန်မဟုတ်ဘဲသူတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ထုတ်ကုန်ကိုတောင်းခံသောအသုံးပြုသူဟုလူသိများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်မှာရှင်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူကွဲဟောင်းကိုပိုကြိုက်သည်။ ပျက်စီးမှုကိုမပြုပြင်မီတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ရမည်။
ahhhhhhhhhhhhh ahahahhhhhhh facebook
nooooo ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ဗားရှင်းအသစ်ကဆိုးတယ်၊ နှေးတယ်၊ ပြတင်းပေါက်လေးက“ ဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်သွားပါ” လို့ပြောပြီးငါတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လာချင်တယ်လို့ငါ့ကိုပြတင်းပေါက်မလေးသေးဘူး ... !!!! !!!!
ဒါကအရုပ်ဆိုးပြီးရိုးရှင်းပြီးစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပြောရရင်သူတို့ဟာဒီဗားရှင်းအသစ်ဟာတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ရင်သူတို့ ekivokaron …။ အဟောင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးတ ဦး တည်းက၎င်း၏ configuration ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပါတယ် ...
arturo hernandez အားပြန်ပြောပါ
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အနည်းငယ်ပူပန်ပါကသင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်ရန်အတွက်အပလီကေးရှင်း ၄၀၀ ဖွင့်ထားခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးမိနစ် ၂၀ အချိန်ယူသည်နှင့်အမျှဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ပိုကောင်းကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
carolina gonzalez bathrobe ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပုံစံအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ အရင်ပုံစံဟောင်းကိုပြန်ချင်တယ် ။11111
carolina albornoz gonzalez အားပြန်ပြောပါ
genny paola cupaban ဟုသူကပြောသည်
acu အသစ်ဗားရှင်းရှုပ်ထွေးကြောင်း nuuu ရှိ !! ဒါ့အပြင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဗားရှင်းအသစ်ကိုသုံးခိုင်းတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါကဘာမှမပေးခဲ့ပါဘူးနှင့်ရုတ်တရက် session တစ်ခုစတင်သောအခါငါကဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူထွက်လာပေမယ့် uffffff ငါမကြိုက်ဘူး! ငါဒီ VERSION မကြိုက်ဘူးများစွာသောငါတို့အကောင့်ထဲသို့ယူမျှော်လင့်ပါတယ်! အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်သော Facebook စာအုပ်ကိုပြန်ခေါ်ပါ။
genny paola cupaban သို့ပြန်သွားပါ
သင်ဖန်တီးသူများကလူများစွာကိုရှုံးနိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့မလုပ်ပါနဲ့ !! XQ များစွာသောသူတို့သည်အခြားသူများကြားတွင် H5 သို့သွားရန်ကြိုက်နှစ်သက် !!! USSSSSSSSSSS ကဲ့သို့အရာခပ်သိမ်း !!
ငါအသစ်ဗားရှင်းအလွန်ရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့်ငါဗားရှင်းအဟောင်းကိုငါလိုခငြွဖေ့စ်ဘွတ်ဗားရှင်းဟောင်း၏ link ကိုမရကြဘူး
Dany အက်စ် ဟုသူကပြောသည်
PREVIOUS VERSION သို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း ?????????????????????? ၎င်းသည်မသိသေးသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရန်အကူးအပြောင်းသို့ပြန်သွားရန်ပြောသော link ကိုကျွန်ုပ်မြင်ရသည့်အရာမှ…ထိုနည်းတူမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအမေရိကန်သည်ကောင်းကျိုးရှိလိမ့်မည်။ -
Dany S. သို့ပြန်သွားရန်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဘယ်လိုအသစ်ပြုပြင်လဲ နှင့် link ကိုပေါ်လာပါဘူး……………………………
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားရန်လိုသည်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သော hahaha အသစ်ကကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်သည်ကိုကူညီသည်
ငါ Old FACEBOOK ကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါဘယ်လိုဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မရဘူး၊ အိုင်တီကနေသူတို့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့ HEEELPPPP !!!!!
သင့်ရဲ့ version ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်
ငါအတွက်ဘာကငါလဲဗားရှင်းဟောင်းနှင့်အတူနေတယ်၊ ​​ဒီဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းကိုမသတ်ပါနဲ့၊ ငါအသက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့ကိုကူညီပါ။
အက်ဝါဒို Arevalo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကြည့်ပါ၊ ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ပြန်သွားကြောင်းပြောသောခလုတ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ eduardo arevalo el savador မှ ... ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ထိုခလုတ်မပါဘဲပြန်သွားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
eduardo arevalo အားပြန်ကြားပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ကျွန်တော်ဒီ option ကိုမမြင်ဘူး
ငါ့ကို x fa ကူညီပေးပါ
Rosemery Garcia က! ဟုသူကပြောသည်
တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် =)
Rosemery Garcia သို့ပြန်သွားပါ!
အိုင်အက်စ်အိုင်တစ်စုံတစ်ရာသည်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်မမြင်ရသောအခါတစ်စုံတစ်ရာပျက်ကျမှုဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်အသစ်သောအရာဝတ္ထုများကိုနားလည်ရန်မလိုအပ်တော့သည့်အိုဟောင်းသော Facebook စာအုပ်ကိုပြန်သွားရန်လိုအပ်သည်
ငါနင့်မျက်နှာဘုတ်အသစ်ကိုမုန်းတယ် .. အားလုံးရှုပ်ထွေးနေတယ်
ငါ AAAAAAAAAAAAAA နဲ့မတူဘူး
Q RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR အိုင်တီကိုပြောင်းလဲပါ။
Francisca valencia အားပြန်ကြားပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းသို့သွားရန်ပြတင်းပေါက်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုမည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုသိလိုပါသည်။ ဗားရှင်းသစ်သည်ရိုးရှင်းပြီးရှုပ်ထွေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လျှောက်လွှာအားလုံးကိုယခင်ကဲ့သို့လွယ်ကူစွာမရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လေးစားမှုမရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ဤဗားရှင်းအသစ်ရှိမရှိဘယ်သူမှမမေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အကောင့်ကိုပိတ်ရန်စဉ်းစားနေပါသည်။
ငါ link ကိုမမြင်ရ: S
အိုဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ပြန်ချင်ပါသည်။ ဘာကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲရတာလဲ ??
ငါအသစ်တစ်ခုကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောပြုသကဲ့သို့ငါအဟောင်းကိုဖေ့စ်ဘွတ်ကိုပြန်ချင်တယ်, တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကူညီနိုင်ပြီး, ငါ "မတိုင်မီထွက်လာသောပြတင်းပေါက်ငယ်" ဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားလို့မရပါဘူး .. နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအချို့အဖြေမျှော်လင့်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ... ငါဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်ချင်တယ်၊ အသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ "ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ပြန်ရန်" ရွေးစရာကိုမရဘူး။ သတိပြုသင့်သည်မှာ ငါ logged တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သူကသူ့ဟာသူပြောင်းလဲသွားတယ် ... နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်, uuuuuurgenteeeeee အဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ် ...
Maria Cristina အားပြန်ပြောပါ
ANA KALENKA ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း၊ ငါရေးတဲ့ပုံစံအသစ်မှာပြaနာရှိနေလို့ငါရေးတယ် ငါ session ကိုစတင်သောအခါ, သစ်ကိုဗားရှင်းအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ငါမရှိတော့ဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ option ကိုမရတော့နှင့်အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်, ငါ့အမြင်အရ facebook အသစ်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စနစ်တကျဖြစ်တယ်, ငါတကယ် Don နားမလည်ကြဘူး။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြန်ပြောပြပြီးဗားရှင်းဟောင်းကိုပြန်သွားနိုင်မယ့်အဖြေတစ်ခုပေးတယ်။
ANA KALENKA သို့စာပြန်ပါ
nooooooooooo gassssssssssss ငါနင့်မျက်နှာကိုမလိုချင်တော့ဘူးနော် .. နင်နင်နုတ်ထွက်တော့မယ် .. guacalaaaaaaaaaaaaaaaa .. ကူညီ meeeeeeeeeeee
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းအဟောင်းနှင့်ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ပြန်သွားရန်ပြတင်းပေါက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းမမြင်လိုပါ၊ အမှန်မှာ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့မဖြေရှင်းနိုင်ပါက
bbuu …မို့လားးးးးးးး !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ဒါဟာစူပါ penca .. တစ် ဦး shine po မဟုတ်ပါဘူး ..
ငါဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားလို့မရဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ fuck ဆိုတဲ့ခလုတ်ဟာဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ငါမပေါ်လာဘူး။ ငါဘာလုပ်နေလဲ။
ငါ Facebook Book ၏ဗားရှင်းသစ်ကိုအားသွင်းသည်၊ အဟောင်းကို ပြန်၍ မသွားနိုင်တော့ပါ၊ ညာဘက်တွင်မည်သည့်ခလုတ်မှကျွန်ုပ်နှင့်မတွေ့ပါ။ !!!!!!
FACEBOOK ၏ VERSION အသစ်ကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်နိုင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုပါက၊ ကျွန်ုပ်သည် Facebook စာအုပ်ကိုအမြဲတမ်းစွန့်ခွာတော့မည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ မှလွဲ၍ မည်သူမျှထိုအရာကိုနှစ်သက်သည်မဟုတ်ပါ!
အိုင်တီတစ်ခုသည်အပြောင်းအလဲသစ်မှ စ၍ အဟောင်းသို့ပြောင်းနိုင်သည်။
သင့်ကိုမေးပါ။ မည်သူမဆို FACEBOOK ၏ VERSION အသစ်ကိုမလိုလားပါ၊ ၎င်းကို Old to One သို့ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်းရှိသည်။
... ငါဆက်သွယ်ပြီး fb version အသစ်ထွက်လာတယ်။
နှင့် x နှစ်ခုစလုံးကငါ့ကိုအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ option ကိုပေးသည် ...
ငါတတ်နိုင်လျှင်ငါဘာလုပ်နိုင် ... မတိုင်မီဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားလို့မရဘူး ... ? ငါ့ကိုအဟောင်းကိုထပ်ချင်ပါဘူး link တစ်ခုပို့ပါအသစ်ကအလွန်ရှုပ်ထွေးငါမသိ: ဟုတ်ကဲ့!
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပုံစံသစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင်စားပွဲငယ်လေးပေါ်လာခြင်းမရှိသောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပြန်လည်မရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုပါက plisss: $
သင်တိုင်ကြားမှုကိုရပ်တန့်နိုင်ပြီးကြည့်ခြင်းအားအိုဟောင်းဗားရှင်းသို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်းဟုပြောနိုင်ပါသလား ??? ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ Window နောက်တဖန်ပေါ်လာသည်။ နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံရှိလျှင်မည်သူမဆိုသိသလား။
ငါ link ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့မရကြဘူး
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုလေးလေးနက်နက်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်သောလင့်ခ်မှပင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသောအကူအညီလိုအပ်သည်။ မျက်နှာ၏မူကွဲအသစ်သည်အချည်းနှီးဖြစ်သည် !!!!!!!!!!!!!!!!
ဒီဗားရှင်းဟာဘယ်လောက်ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာလူတိုင်းကို myspace ကိုစတင်အသုံးပြုဖို့ဒါမှမဟုတ် hi5 ရဲ့အမြစ်ကိုပြန်သွားဖို့လူအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
xuxa ပြန်လာတော့ငါသူတို့လာတဲ့ kaga တွေကိုဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး
kagaron toaaaaaaaaa ကိုပုံစံအသစ်ဖြင့်မည်သူ့ကိုမဆိုအားပေးပါ
ငါအဲဒီ corduroy ကိုမရကြဘူး။ ဘယ်လိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရမှန်းမသိဘူး၊ အဲဒီညမှာကျွန်တော်အရမ်းပင်ပန်းနေတယ်၊ ​​တကယ်တော့ဘာလုပ်သင့်လဲ
Jose Hill သို့ပြန်သွားပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းသို့ပြန်သွားပါက aiiii keremos သည်နူးနာ့သစ်သည် sooo fome (N) q ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လာပါ။ !!!!!!
ကူညီပါ! ကိုယ့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပြန်သွားလို့မရတော့ဘူး။ အသစ်တစ်ခုကအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။ ရှုပ်ထွေးတယ်။ x ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဗားရှင်းအသစ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါ။ ငါတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအားလုံးကိုငါနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တယ်
ငါ Facebook ပုံအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဒီအိုင်တီကကျွန်တော့်အတွက်တကယ့်ကိုဆိုးရွားပုံရတယ်၊ အဲဒီလိုပြန်မရတဲ့လမ်းကိုကြိုတင်ဒီဇိုင်းငါဘာလုပ်ရမလဲ ????????????????? ??????? ?????? ''
ဤအရာအားလုံးအတွက်ကျော်ကြားသော ၀ င်းဒိုးကိုငါပြန်ရှာရန်မတွေ့ခဲ့ပါ ???????????????????????????????????? ??? ?????????????
၎င်းသည်လေးစားမှုမရှိခြင်း၊ ဗားရှင်းအသစ်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီးရှုပ်ထွေးမှုမရှိ၊ မတရားသဖြင့်ပြုမူခြင်း၊ သူတို့အသုံးပြုရန်အတွက်မူကွဲများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ရန်မည်မျှဆိုးဆိုးရွားရွားဆုံးဖြတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊ အဟောင်းနှင့်မူရင်းသည်ဤလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထက်များစွာသာလွန်သည်။ !!! ငါ Old FACEBOOK ချင်တယ် !!!!! : '(
Hey peo komo သူတို့ဟာအရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုတီထွင်ကြတယ်။ ငါ ၁ နာရီခွဲကြာအောင်အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​အဲဒါကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူမရှိဘဲတစ်ယောက်တည်းနေတယ်။ Facebook ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၏။
uyyy ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဗားရှင်းကိုတကယ်တမ်းမကြိုက်ဘူး၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောင်းလဲပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်ဖို့ niya ကကျွန်တော့်ကိုမမြင်ရဘူး
ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း။ Aaa urgeeee ကကူညီသည်
katherin liz ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြုပြီးမျက်နှာဟောင်းကို nono ke baina သို့ပြောင်းရွှေ့ပါ
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါတုန့်ပြန် xaooo မျှော်လင့်ပါတယ်
katherin liz သို့ပြန်သွားရန်
သူတို့လဲကျသွားပြီ Facebook ကသတိထားမိလာလိမ့်မယ်။
ငါမူကားအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ကြိုးစားနေ 12 နာရီကျော်နှင့်ဘာမျှမ
မတရားဘူး။ သူတို့မကောင်းတဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုသူတို့ install လုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါတွေပုံမှန်ပြန်မလာရင်ငါ့အဆက်အသွယ်တွေလည်းစွန့်ခွာသွားမှာပဲ ဗားရှင်းဟောင်း၊ မင်းတို့ကငါတို့စကားကိုနားထောင်ပြီးဖတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတို့အတွက်တော့မှတ်ချက်တွေပေးပြီးအုပ်စုထဲ ၀ င်ဖို့ငါတို့တိုက်ဖျက်ရမယ်။ Facebook ကဒီဇိုင်းအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး။ အဲဒီမှာငါတို့ထောင်ပေါင်းများစွာမြင်နေရပြီးဒီမတရားမှုကိုငါတို့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ... ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းကိုလိုချင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်အားပြန်ပေးရန် aldo de aariba မှမည်သည့် tab ကိုမှမရှာပါ။ ကျွန်ုပ်မရရှိသည် ... ကျွန်ုပ်၏ fb အဟောင်းကိုပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ငါဗားရှင်းအသစ်၌ပြုသကဲ့သို့, အမှတ်တံဆိပ်အဟောင်းဗားရှင်းပြန်သွားဖို့မထင်ရှားမီ, ယခုငါမူကွဲအသစ်မုန်းကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကူညီ, ငါအဟောင်းဗားရှင်းပြောင်းချင်ပါတယ်။
အီဗလင်း flores ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြောင်းချင်တယ်။ အခုဖေ့စ်ဘွတ်ဟောင်းကိုပြန်သွားပြီလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ log မပေါ်ဘူး
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ဟောင်းကိုပြန်ချင်တယ်၊ အသစ်ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး။
evelyn flores အားပြန်ကြားပါ
qu လိ quevedo ဟုသူကပြောသည်
eli quevedo အားပြန်ပြောပါ
Gustav Aguari ဟုသူကပြောသည်
ဒီပို့စ်ကိုတီထွင်ခဲ့တယ့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောရှပ်အင်္ကျီနှစ်စကိုငါထင်တယ်။ FACEBOOK မှအခြားအရာများက AVERNOS မှ PREVIOUS VERSION သို့ပြန်သွားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ငါသည်သူတို့ဖြစ်ပျက်သောအရာ ... ဂုဏ်ယူစွာမကျင့်သောဤမျှ Idiot မဟုတ်ပါမျှော်လင့်ပါတယ်။
GUSTAVO AGUIAR သို့ပြန်ပြောပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းသို့ပြန်သွားရန် '' ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ရောင်းချမှုမှမရရှိပါက ......... ကျွန်ုပ်သည်ဤစမ်းချောင်းတွင်ရှုပ်ထွေးနေသောသစ်တစ်ခု၏ knsada ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Facebook အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဗားရှင်းသစ်ကိုအလွန်ဆိုးရွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး Gustavo ၏ဒီဇိုင်းအရသူတို့သည်ဟောင်းနွမ်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတောင်ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Angel Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
ဒီလားကိုမကြိုက်ဘူး၊ အဟောင်းကိုပြန်ချင်တယ်။ ငါလုပ်တော့သူတို့ကငါ့ကိုမလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမပေးခိုင်းဘူး။
Facebook အသစ်ဟာပြnewနာတစ်ခု… သူတို့ကသင့်ကိုဗားရှင်းအသစ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ပြီးတော့နောက်ခြေတစ်ချောင်းမကိုင်တော့ဘူးနော်…………။
uuuii ဟုတ်တယ်ငါငါ့ဖေ့စ်ဘုတ် antii9uo0 ကိုဘယ်တော့မှပြန်မသွားနိုင်ဘူး! kajjka
အခြားပိုကောင်းခဲ့ပါတယ် pok iapoh မျှော်လင့် kambiien !! ဟုတ်ကဲ့ too0 el ratho =!
ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြတာပါ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ အဆိုးဆုံးကတော့ဗားရှင်းဟောင်းကိုမပြန်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်မပိတ်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ သင်ဤသည်မည်မျှဆိုးသည်ကိုပြန်သွားနိုင်သည့်ဘာသာစကားတွင်မထင်ရှားပါ
felipe retamal ဟုသူကပြောသည်
ဗားရှင်းသို့ပြန်သွားရန် ၀ င်းဒိုးမရှိပါ
၎င်းသည်လိမ်လည်မှုနှင့်နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် အကယ်၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ဤသို့ဆက်ရှိနေပါက
___-– ksr -
felipe retamal မှတုံ့ပြန်ပါ
noooooooooooooooooooo ငါဒီဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပုံစံအသစ်ကိုကြိုက်တယ်၊ အရင်ကဟောင်းကိုဘယ်လိုသွားရမလဲပြောပြပေးပါ၊ အရင်ကအရင်ကထက်ဒီထက်အများကြီးကောင်းတယ်…………
တစ်ချိန်ကကပေါ်လာပေမယ့်ငါ့အ pc အပေါ်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ pc ပေါ်မှာ
ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း။ ပြောသော ၀ င်းဒိုး - မူကွဲအဟောင်းသို့ပြန်သွားရန်မပေါ်တော့ပါ။
အမှန်တရားကတော့ငါဒီ Facebook ဗားရှင်းအသစ်ကိုငါတကယ်မကြိုက်ဘူး။ ကျွန်တော်မြင်တွေ့ချင်သော application အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သူတို့ကတစ်နေရာရာမှာရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါအဟောင်းလိုချင်တယ်။ ဒီဇိုင်းသစ်သည်ပင်ဆိုးရွားလှသည်။
aguilar levicoy ဗစ်တာ ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်လူကြီးလူကောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားနိုင်ဖို့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာဘယ် link မှမရဘူး၊ ဗားရှင်းအသစ်ကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာပိုမြန်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူးဒါပေမယ့် ဗားရှင်းအဟောင်းကပိုကောင်းတယ်
အလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗစ်တာ Aguilar ။
victor aguilar levicoy သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်၏ဟောင်းနွမ်းသော FACEBOOOOKKKKKKKK မ်ား cry ငိုချင်ပါသည်
ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ ပြန်၍ မရပါ၊ အသစ်ကိုလုံးဝမကြိုက်ပါ၊ ၀ င်းဒိုးပေါ်လာပြီးအသစ်သို့ပြန်မသွားမီပြတင်းပေါက်မှထွက်မလာပါ။ ယခုတွင်၎င်းအား နှိပ်၍ မှားမိပါသည်။ ပြတင်းပေါက်ကနေပြန်လာလို့မရဘူး။ ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။
ကိုယ့်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သည့်နောက်ဆုံးရှာဖွေမှု။ ငါ Facebook စာအုပ်၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်အိုမင်းသောအသုံးပြုသူများကိုမလေးစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိုဟောင်းဗားရှင်းသို့ ပြန်၍ အဘယ်သို့ငါသွားနိုင်မည်နည်း။ YA Q သတ္တုတွင်းရှိအိုဟောင်းဗားရှင်းသို့ပြန်သွားရန်မပေါ်ပါ။ ငါဒီနည်းကို Facebook စာအုပ်အသစ်ကိုမုန်းတီးသည်
ကာရိုလိုင်းနား zamora ဟုသူကပြောသည်
ငါမူကွဲအဟောင်းကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ ဒီဟာကိုငါမကြိုက်ဘူး၊ နောက်ပြန်လှည့်ဖို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူး
carolina zamora သို့ပြန်သွားရန်
Old FACEBOOK သို့ပြန်သွားရန် link မပေါ်လာပါ။ ဒီသီချင်းကိုငါတို့မလိုချင်ဘူး !!! တစ်စုံတစ် ဦး ကပြန်လာနိုင်ရင်ဒီမှာရေးပါ
johana amaya ဟုသူကပြောသည်
ငါဘာလုပ်နေတာလဲငါအသည်းအသန်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​ဗားရှင်းဟောင်းကိုပြန်မသွားဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုကူညီပေးပါ၊ ပြန်လာဖို့အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ငါ့ကိုပြန်ပြောပါ၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။
johana amaya သို့ပြန်သွားရန်
အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကမှတ်ချက်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီး၊ ထိပ်ဆုံးကနေ၊ မှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူး
ကျေးဇူးပြု၍ ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်သွားသည်ကိုပြောပြပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနားကိုငါနားမလည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်
FACEBOOK ၏ VERSION အသစ်၏အသိဉာဏ်ရှိသောအတွေးအခေါ်ကိုရရှိခဲ့သူ၊
Facebook ၏ဗားရှင်းသစ်ကိုမည်သူမျှမနှစ်သက်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ... သူတို့သည်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းမှပြောင်းလဲခြင်းသို့ ၀ င်းဒိုးများဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သီးခြား application များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်၊ ရှုပ်ထွေးနေသည် ...
အဟောင်းကိုပြန်လာကြကုန်အံ့ !!!! သို့မဟုတ်သင်အဟောင်းနှင့်အသစ်အကြားရွေးချယ်နိုင်သည်လျှင်ပင်။
မှတ်ချက်တွေပေးဖို့ကျနော့်လင့်ခ်ကိုဘယ်တုန်းကမှမရောက်ခဲ့ဘူး။ မှတ်ချက်ပေးဖို့ပြောပေမယ့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းဟောင်း - အသစ်တစ်ခုဟာအမှိုက်ပုံးပဲ
ငါဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားနိုင်တော့မည်မဟုတ်။ ယခုတွင်ဖောင်းပွလာပြီ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အရာခပ်သိမ်းရှုပ်ထွေးနေပုံရတယ်
ငါ facebook အသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ အရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်၊ အပလီကေးရှင်းတွေကအရင်ပုံစံလိုမလွယ်ကူဘူး၊ ဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ရွေးစရာကိုငါမတွေ့ဘူး၊ ငါတို့အားလုံးလိုချင်တာကိုတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဗားရှင်းမတိုင်မှီကျွန်ုပ်အတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်
ငါအသစ်သော VERTION မကြိုက်ဘူးငါထွက်ခွာမည်မဟုတ်
ငါမထွက်လာဘူးဆိုရင်၊ AND ငါအိုင်တီပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံမသိ
ကျွန်တော့်အားရိုသေလေးစားမှုမရှိခြင်းက၎င်းတို့အားတစ်ခုအားဗားရှင်းအသစ်တွင်နေရန်အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်တွင်သူက၎င်းကိုမကြိုက်ပါကပြproblemနာမရှိကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့သည်။ ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ ယခုအချိန်အထိတူညီသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းမှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်။ ငရဲတစ်ခုသည်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် link သည်ပုံစံဟောင်းအတိုင်းပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့တော်တော်များများငါသေချာပါတယ် ... ငါလေးစား၏စာမျက်နှာကိုပိတ်လိုက်ကြလိမ့်မည်ကတည်းကလျင်မြန်စွာဒီဖြေရှင်းပါ။
ငါ link ကိုအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ link ကိုမရကြဘူး, ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင် ??? ငါ Facebook အသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး !!!
VERSION အသစ်သည်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါမသိဘူးဒါပေမယ့်ငါ PROFILE ကိုဖွင့်ဖို့မိနစ် ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတယ်။
ထို့အပြင် Facebook FACEBOOK အသစ်သို့ပြန်သွားရန်လင့်ခ်။ ဒီနည်းကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူး ????????
ထို့အပြင် Old FACEBOOK ကိုမရှိတော့သည့်ရှေးဟောင်း Facebook စာအုပ်သို့ပြန်သွားပါ။ ဒီနည်းကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူး ????????
ထို့အပြင်အဟောင်းများကို Facebook စာအုပ်တွင်မရှိတော့ပါ။ ဒီနည်းကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူး ???????
VERSION အသစ်သည်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်လို့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုဖွင့်ဖို့အတွက်မိနစ် ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတယ်။
ထို့အပြင် Old FACEBOOK ကိုမရှိတော့သည့်ရှေးဟောင်း Facebook စာအုပ်သို့ပြန်သွားပါ။
ငါတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး facebook အဟောင်းလိုအပ်ပါတယ်။
အသစ်တစ်ခုကိုအလွန်ပျင်းစရာ xD ဖြစ်ပါတယ်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ပြန်သွားလိုပါကမည်သူကိုလိုချင်သည်၊ ဗားရှင်းအဟောင်းကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက်ပွင့်လင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အဟောင်းတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ မသက်သာဘူး
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းကိုပြန်သွားရန်လိုအပ်ပြီးစာမျက်နှာ၏ထိပ်ပိုင်းညာဘက်တွင်လည်းထို option မပါရှိပါ။
ana catalina ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ကျွန်တော်ရွေးစရာလမ်းမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ငါလည်းထပ်လုပ်ချင်တယ်၊ ငါ့ကိုကူညီပါ
ana catalina အားပြန်ကြားပါ
ငါဒီဗားရှင်းအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး။ ယခုတွင် lynk သည်မူကွဲအဟောင်းသို့ပြန်သွားပုံမပေါ်ပါ။
သငျသညျမှအကျွမ်းတဝင်အခါ, ကအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ခက်ခဲသည် ...
Waaa! faia သည်အလွန်ရုပ်ဆိုးသောကြောင့်ငါအဟောင်းကိုလိုအပျသောဗားရှင်းအသစ်ကိုအားပေးသောကြောင့်အမ်မီသည်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ပြန်သွားရန် naa မပေါ်ပါ။
x အဖြေတစ်ခုခု faaa !!!!
ငါသည်ငါ့ဟောင်း Facebook ကဒီ chimbo ချင်တယ်
ငါလုပ်ပေးသကဲ့သို့ Xfaaaa အသံ, ဒီ chimboo ၌တည်ရှိ၏
ငါ vercion အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ဘာမှမမြင်ရဘူး
ငါ sesto မှအဖြေကိုသူသည် vercion အသစ် load?
ဒီဖေ့စ်ဘုတ်အသစ်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ငါလေးလေးနက်နက်မဖြစ်နိုင်ရင်ဟောင်းနွမ်းမျက်နှာဖုံးဘုတ်ကိုဘယ်လိုပြန်သွားရမယ်ဆိုတာကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့သူတို့လေးစားမှုကင်းမဲ့နေပုံရတယ်။ သင်မူကွဲအဟောင်းကိုပြန်မသွားနိုင်လျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းသို့ပြန်သွားရန်ကူညီပေးပါ၊ ထိပ်ဆုံးတွင် "ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ပြန်သွားပါ" ဟူသောရွေးစရာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဘာလုပ်နိုင်သည် ??? ဗားရှင်းသစ်သည်အလွန်ဆိုးဝါးပြီးဘာမျှနားမလည်၊ လုံးဝရှုပ်ထွေးနေသည်။
plisss ငါ့ကို ... နုတ်ဆက်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးအရင် version သို့ပြန်သွားပါ !!!
ဒီ maisisma ဖြစ်ပါတယ်
Camila bustamante ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်သွားလို့မရဘူး၊ ငါအရမ်းကြိုက်တာမကြိုက်ဘူး၊ အရင်စာမျက်နှာကိုပြန်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်
Camila Bustamante အားပြန်ကြားပါ
Maria Paz Castillo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပုံစံအဟောင်းကိုပြန်သွားချင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်က ၀ င်ရောက်သောအခါ၎င်းသည်အသစ်ကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားသည်။
အနာဂတ်ဖြေရှင်းချက်များရှိပါသလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟောင်းကိုပြန်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ tab ကပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
María Paz Castillo သို့ပြန်ပြောပါ
XX @ RX ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်သူတို့၏ VERSION အသစ်သည်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သမျှမှာရွံရှာဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟူသော Facebook စာအုပ်ဖန်တီးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးလိုပါသည်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ CLASSIC VERSION LINK ......... Facebook FACEBOOK ကိုဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့သည့်သင်အလုပ်ကောင်းကိုမရှာဖွေပါနှင့်။
XOSK @ RX သို့ပြန်ပြောပါ
ငါ FaceBook အဟောင်းကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ ပြတင်းပေါက်လေးကငါ့ကိုပြန်လာဖို့မလွယ်ဘူး။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
Monica Castro အားပြန်ပြောပါ
ငါလင့်ခ်ကိုမမြင်ရဘူး၊ ဗားရှင်းအသစ်ကိုငါမကြိုက်ဘူး။ မင်းငါ့ကိုဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားနိုင်ဖို့ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ စာမျက်နှာဟောင်းကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ အသစ်ဟာအရမ်းကိုရှုပ်ထွေးပွေလီတယ်။
ဟိုဆေး Alvarado: D ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ဟာကြောက်စရာကောင်းပြီးဟောင်းနွမ်းသောနေရာသို့ပြန်သွားရန်အခွင့်အလမ်းသည်ခဏသာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်မတို့ကိုသူတို့ရဲ့အသစ်နဲ့အဆိုးမြင်တိုးတက်မှုကိုအသုံးပြုဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ »ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်။ ပုံစံတစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပြီးသားဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
သန်း ၃၀ အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
»နှင့်အဘယ်သို့နည်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုစမ်းကြည့်ပြီးနောက် VERSION အသစ်ကိုမည်သို့ကြည့်မည်နည်းဟုသင်ကြည့်လျှင်မူရင်းမူရင်းပုံစံကိုထပ်မံအသုံးမပြုပါ။ »…။
José Alvarado D ကိုပြန်ပြောပါ
... ::: THE TER ::: ... ဟုသူကပြောသည်
nadha အတွက် facebook အသစ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး
... ::: THE TER ::: ... သို့ပြန်သွားရန်
ဂျုံး Manuel ဟုသူကပြောသည်
ဟေ့၊ ဗားရှင်းသို့ပြန်သွားရန်ပြောသောပြတင်းပေါက်မှထွက်တော့မည်မဟုတ်။ အဟောင်းကိုဝတ်ဆင်ထားပြီ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါထွက်တော့မလာတော့ဘူး။ ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေရိုက်ပြီးခေါ်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၃ ရက်အကြာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကမင်းကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး၊ နည်းသစ်
Postscript: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီး chimbo -.-
Joan Manuel အားပြန်ပြောပါ
ငါမုန်းတဲ့ FACEBOOK အသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး။ Old ကိုပြန်သွားလို့မရဘူး၊ ငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး
USS USER အသုံးပြုသူများကပေါ်ပေါက်ခဲ့သောအငြင်းပွားမှုများအား FACEBBOK ၏ VERSION အသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေတစ်ခုရမည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ သူတို့အားလုံးနီးပါး VERSION GARBAGE ကိုမကြိုက်ကြတဲ့သူတွေ၊ အဖြေများပေးပို့ခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အလုံအလောက်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့လုပ်နေတာမဟုတ်လို့ပါ။
အသစ်တစ်ခုကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ FACEBOOK ကိုကြည့်ချင်တယ်။ နာမည်ကျော် ၀ င်းဒိုးတစ်စုံတစ်ရာမေ့မထားပါဘူး။
မတရားဘူး၊ မတရားဘူး၊ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်မှာရှုပ်ထွေးပြီးပျင်းစရာကောင်းတယ်၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်မရှိဘူး၊ သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူး။ သူတို့ပုံစံကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ငါကမကြိုက်ဘူးအပူတပြင်း
noooooo ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ အဟောင်းကိုဘယ်လိုပြန်သွားနိုင်လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ !!!
katherine morales မှ reply
တကယ်တော့ oe ဟာ Facebook ဟောင်းကိုပြန်သွားပုံမရဘူး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်မှာစစ်တမ်းတွေလိုခေါ်ချင်တဲ့အချက်အလက်တွေမပြနိုင်ဘူး၊ သူတို့အားလုံးကိုပြသတာလည်းမဟုတ်၊ သူတို့လျှောက်ထားတဲ့ application အားလုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။
ငါကအခြားဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ဗားရှင်းကိုပိုကောင်းတယ်၊ အသစ်တစ်ခုကရှုပ်ထွေးတယ်၊ နောက်တစ်ခုကပိုပြီးလှတယ်၊ စနစ်ကျတယ်၊ အရာအားလုံးကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်တယ်၊
ငါစိတ်ဓာတ်ကျနေသောကျွန်ုပ်နှင့်တူညီသောအရာများရှိသည့်အသုံးပြုသူများစွာရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုမှလက်မခံခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်တစ်ရက်မှနောက်တစ်နေ့သို့ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်သုံးစွဲသူအများစုကိုမကြိုက်ပါ။ သူတို့လည်းငါ့ကိုကြိုက်တယ်
မင်္ဂလာပါ .. ဒီမှာလူတိုင်းလိုပဲအဟောင်းကိုပြန်သွားချင်တယ်။ အမှန်တရားက 'အသစ်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးရန်၊ ' အခြားမူကွဲသို့ပြန်သွားရန်မဖြစ်နိုင် 'ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အဲဒါကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ, ငါမျှတစဉ်းစားကြဘူး။ မျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုကြသူငါတို့ရှိသမျှသည်တကယ်ကိုတိကျတဲ့အဖြေရှိသည်။
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ ငါ့မှာရှိပြီးသား applications တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ပြောတဲ့ပြတင်းပေါက်လေးကမဟောင်းတော့တဲ့ပုံကိုအဟောင်းကိုဘယ်လိုပြန်သွားရမှန်းမပြောတတ်တော့ဘူး
pucha ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပုံစံအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ ပိုကောင်းတယ်
ဗားရှင်းအဟောင်းသို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားပြောပြနိူင်ပါသလား။
ငါအဲဒီ option မရကြဘူး
ke xiri အားပြန်ပြောပါ
ဖြေရှင်းချက်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ...
ဟေ့ yapo ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သင်အနိုင်ရခဲ့သလား
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဒီဇိုင်းသစ်ကိုပြောင်းရန်မရွေးချယ်ခဲ့ပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါဘာမှမနှိပ်ဘဲပြောင်းလဲသွားသည်။ အဆိုးဆုံးမှာပုံစံအသစ်ကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ အများဆုံးသူတို့တစ်ခုခုစည်းကြပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
«ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်သည်ယခုအခါတစ်ခုတည်းသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက site ပေါ်တွင်ပေါ်လာသောအဝါရောင်ရင်ပြင်များကိုဂရုပြုပါ။ » .... crap ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်ဖေ့စ်ဘုတ်အသစ်၊ မည်မျှလေးစားမှုမရှိကြောင်း .... ငါတို့အားလုံးထုတ်ဖော်ပြောကြားလျှင်ကောင်းလိမ့်မည်။ "comment တွေပို့ပေးပါ" လို့ပြောတဲ့ link ထဲမှာအဲဒီသဘောထားကွဲလွဲမှုဟာ version ဟောင်းကိုပြန်သွားသင့်တယ်
GRGR ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုလိုချင်သည်။ ၎င်းသည်မျက်လုံးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဂါစီလီယန်နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပြန်လာသည် !!!!
ငါစာမေးပွဲဟောင်း၏ဗားရှင်းသို့ပြန်သွားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းဗားရှင်းအသစ်ကိုကြည့်ရှုရန် ၀ င်ရန် ... ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကိုစမ်းကြည့်သောကြောင့်အဟောင်းကိုပြန်မသွားနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုမသိပါ၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောအရာသည်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းမကူညီနိုင်ပါ။ ငါရွေးစရာမရှိဘူး၊ နောက်ရွေးချယ်စရာရှိသေးလားသိချင်တယ်။ ဒီဖေ့စ်ဘုတ်အသစ်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းစုစည်းနိုင်အောင်ခွင့်မပြုဘူး။ ဒါ့အပြင်အဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်း၊ တစ်နည်းပြောရရင် ၎င်းသည်အလွန်ညံ့ဖျင်းစွာဖွဲ့စည်း ထား၍ အလွန်နှေးကွေးသည်။ ၎င်းသည် ASKO ဖြစ်သည်! ငါသည်သင်တို့၏အဖြေကိုအမြန်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀 madey! (*)!
ငါဗားရှင်းအဟောင်းသို့ ပြန်၍ မရပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးဝင်သောဖြေရှင်းချက်ပေးပါ။ ဤတွင်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်းသိမြင်ပါသည်
Old FACEBOOK သို့ပြန်သွားရန်ဤ link တွင်နှိပ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ ပြန်၍ မရပါတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါ
ငါသည်လည်းအသစ်သော FACEBOOK နှင့်အတူနေရန်အတင်းအကျပ်လေးစားမှုကင်းမဲ့နေသည်ဟုထင်ရသည်ယခင်က ပို၍ ကောင်းမွန်သည်၊ ပို၍ ကောင်းသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ME က VERSION အသစ်ကိုအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ !!
ငါ NAADAAAA FOR အိုင်တီမကြိုက်ဘူးကြောင့်! သူတို့ကဒီဇိုင်းနှင့်အတူမဖြောင့်ဘူး။
ငါ Old VERSION ပြန်လာကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ် ..
လူတွေနားလည်မှုရချင်ကြတာကြောင့်လူတွေအများကြီးပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့မှတ်ချက်များကိုပြောင်းလဲမှုအသစ်ကိုထောက်ခံအားပေးမှုမရှိကြပါဘူး
ကောင်းပြီ, သင်ဤ link ကိုဘယ်လိုမြင်ကြလိမ့်မည်နည်း
အလုပ်မရှိတော့ ... ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိဖေ့စ်ဘုတ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖိအားပေးခံရသည်။ အသုံးပြုရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ လျှောက်လွှာများအသုံးမပြုတော့တော့ပါ၊ စတစ်ကာများလည်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်မည်သူမျှမမြင်ရသည့်ပြတင်းပေါက်တွင်ရှိနေသည်။ အဆိုပါ tees အဘယ်သူမျှမဖြစ်စေသူတို့ကိုမြင်လိမ့်မည် !!!
ဒါပေမဲ့ငါ ANTIGUAA နှင့်အတူနေဆဲလုပ်!
DIOOOSS ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! 😀
သူတို့ကပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရင် .. ဒီစာမျက်နှာ MAAA ကိုကျွန်တော်မသုံးပါဘူး။ .. ငါပြန်သွားချင်တယ်ငါဒီဓာတ်ပုံပုံအရ။
Penelope Lía Rojas Pizarro ဟုသူကပြောသည်
ငါလုံးဝမှာမကြိုက်ဘူး။ , ....
ပိုပိုပြီးမင်းက version ဟောင်းကိုပြန်သွားလို့မရဘူး !!
ပျင်းစရာကောင်းတယ် !! ဒါကြောင့်ငါ့ကိုငြီးငွေ့တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်
ငါတို့ကိုကူညီပါ ... ဘယ်သူမှဒီကြိုက်တယ် !!
Penelope Lía Rojas Pizarro အားပြန်ပြောပါ
ငါမမြင်မိဘူး၊ ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်ဖို့ကအချိန်ယူရတယ်၊ မကြိုက်ဘူး၊ အရင်တုန်းကပြန်သွားချင်တယ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟောင်းကိုပြန်မရနိုင်ဘူး၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ
ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုမျက်နှာဖုံးစွပ် !!! porvavoooor!
IAN လိယ ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းသည် အကယ်၍ အမှန်တရားဖြစ်ပါက ... LINK Q မပေါ်လာပါကယခင်ဗားရှင်းသို့ ...
နှင့်အသစ်သောအသစ်သောအရာတို့ကိုလည်းရှိပါတယ် ... တစျခုကြည့်ဖို့ ... Windows ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ရန် ...
AND PS ဒီထက်အများကြီးပိုကောင်းသည်ယခင် ...
SO မေးပါ ...
ဂျိုးဇက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ... မေး။ ။ ထိပ်ဆုံးမှပါ ၀ င်သောမှတ်ချက်တစ်ခု။ LINK ကိုပေးသည်။ Q ဒီသည် MSJ တွင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်တစ်ခု ... ရိုးရှင်းသော CLIK တစ်ခုပေးခြင်းသည်ယခင် VERSION သို့ပြန်သွား ...
မာရီယန် Bonomelli ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ ပြန်၍ မရပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်မှ Anigua ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဗားရှင်းကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး
ရိုးရှင်းစွာထုံးစံတစ်ခုအရာအဘို့နှင့်မတိုင်မီလျှင် buskar tod မှမနှစ်သက်မဟုတ်ပါဘူး
အရာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေခဲ့ = /
marion bonomelli သို့ပြန်သွားရန်
NOOOOOO ငါပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ သူတို့ပြောတာတွေထဲကထွက်မလာပါဘူး
ငါအဟောင်းကိုပြန်သွားလိုတဲ့ SALUTIONNNN နှစ်သက်ပါ
Dario Abarca Orellana ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင်ယခင်ဖော်ရွေလွယ်ကူလွယ်ကူပြီးလွယ်ကူစွာသွားနိုင်သောဗားရှင်းအဟောင်းသို့ပြန်သွားရန်အချိတ်အဆက်မရှိပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေသော၊ ဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်ပေးရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
Dario Abarca Orellana အားပြန်ပြောပါ
valeria melany ruiz jerez ဟုသူကပြောသည်
ဘာဖြစ်သွားလဲ။ ငါ Facebook ဟောင်းကိုပြန်ချင်တယ်။ အထက်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းအပြင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး၊ ညာဘက်အခြမ်းမှာဖေ့စ်ဘွတ်ဟောင်းကိုပြန်သွားတယ်လို့ပြောတယ်၊ ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့နေရာတောင်မှမနှိပ်ရင်အဟောင်းကိုပြန်သွားချင်တယ်။
PS: po လျှင် uyedenme
valeria melany ruiz jerez အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်မရနိုင်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရွေးစရာကိုမရပါ။ အသစ်တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်ကိုဝန်တင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ meeeeeeeeee ကိုကူညီပါ
valeska valenzuela novoa ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး!!!!! အမှုမရှိဘူး၊ ငါမကြိုက်ဘူး !!!!! အဲဒါရှုပ်ထွေးတယ် !!! ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသားဖြစ်ခဲ့လည်းငါအဟောင်းကိုပြန်သွားချင်တယ်။ ကိစ္စမရှိဘူး !!! ... .. မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအဖြေကို !!!
valeska valenzuela novoa အားပြန်ပြောပါ
အော်စကာ cardozo ဟုသူကပြောသည်
ငါမူကွဲအဟောင်းကိုပြန်မသွားနိုင်ပါ၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းလည်းရှိပါသလား။ ဖြေပါ။
oscar cardozo ကိုပြန်လည်စာပြန်ပါ
jessika Moreno ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ .. ဟီ laneta ငါပြန်လာနိုင်သည်ဟုပြသောပြတင်းပေါက်မပေါ်လာပါကငါ့ကိုကူညီရန် pliz အဟောင်းကိုမည်သို့ကူညီရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သင်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း diubujitoss အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကဆေးဝါးကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိလျှင်သွားလိမ့်မည်။
jessika moreno အားပြန်ပြောပါ
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တယ် ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းသာတပ်ဆင်ပြီးအဟောင်းကိုပြန်လည်သွားရန်လင့်ခ်မရှိပါ။ ငါဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူရက်အနည်းငယ်စုံတွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးငါ့ကိုနီးပါးတစ်ခုခုပေးသည်! အရမ်းဆိုးတယ်
အောက်ပါ link ကိုလိုက်နာပါ။ http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2345053339
ထို application ကိုသွင်းပြီးသည်နှင့်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ http://apps.new.facebook.com/?fbnew_opt_out=1 နှင့်အဆင်သင့် !!!
ထိုနေရာတွင်သူတို့သည် FACEBOOK အဟောင်းသို့ပြန်သွားသင့်သည်။ အနည်းဆုံးကငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Jorge Ramirez Z ကို ဟုသူကပြောသည်
Jorge Ramírez Z ကိုပြန်ပြောပါ
ingrid llanca ဟုသူကပြောသည်
!!!!!!!!!!!!!! ယခုငါကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တင်ဆက်မှုဟောင်းကိုပြန်လိုချင်သည်၊ အသစ်တစ်ခုသည်လုံးလုံးလျားလျားမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်၊ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သုံးစွဲသူများစွာကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမည်ကိုသူတို့မသိကြပါ။ ရှေးဟောင်းသို့ပြန်သွားရန်ရွေးချယ်ထားသော pooooooooo သည်သင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အသုံးပြုသူများ၏အရသာကိုလွှမ်းမိုးထားလိမ့်မည်။ နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်သည် !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
ingrid llanca အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းကိုပြန်ချင်သည်။ ဤစာမျက်နှာကပြန်သွားရန်ပြတင်းပေါက်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်စင်ကြယ်သောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသုံးစွဲသူများဖြစ်ပြီးအပြောင်းအလဲမလုပ်ခင်သူတို့ကပထမ ဦး ဆုံးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအများစုကအဟောင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။
စာမျက်နှာအသစ်ကိုသတ်ပစ်ခြင်းသည်မကြိုက်ပါ။ Photolog နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူတို့ပြောင်းလဲလိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြောဆိုခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် fb အသစ်သည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည်မဟုတ်သည့်အပြင်ဖန်ခွက်ကိုကြည့်ကြစို့။ တစ်ဝက်အပြည့်နှင့်မတဝက်အချည်းနှီးသောလုပ်နိုင် xD
အားလုံးအတွက် xao နှင့်ချီလီအတွက် ၁၈
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြား Facebook စာအုပ်တစ်အုပ်လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဟောင်းနွမ်းသော FACEBBOK မှပြန်လာရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်မပြန်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်တော်အသုံးမပြုပါ။
ဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားစရာလမ်းမရှိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်လောက်ပဲရှာဖွေကြည့်နေပါစေအပြောင်းအလဲက ajuro လား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ငါထွက်ခွာတော့မယ်
Carlos ANDRES ဟုသူကပြောသည်
ငါ facebbok ဟောင်းကိုပြန်သွားချင်တယ်၊ link ကမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ငါလုပ်သင့်တာထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ်
CARLOS ANDRES သို့ပြန်ပြောပါ
ငါကြိုးစား။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကို နှိပ်၍ ထိုဗားရှင်းသို့မည်သို့ပြန်သွားနိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်ယခင်ဗားရှင်းဟောင်းသို့ပြန်မလာတော့ပါ။
ငါထင်တာကတော့ရိုသေလေးစားမှုကင်းမဲ့တာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့စကားစုတစ်ခုကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားလို့မရဘူး။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့ကဘယ်သူ့ကိုမှအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်သင့်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ဟောင်းကိုမည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုသိလိုသည်၊ အသစ်စက်စက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် ဖြစ်၍ ဘာမျှနားမလည်ပါ
ဒါမှမဟုတ်ငါ faceook uu မပိတ်ဘူးဆိုရင်
ဒါက ke keda ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာ Facebook ကိုအဟောင်းပြန်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးပြောဖို့ငါဒီမှာမရှိဘူး။
camila sobarzo ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါနားမလည်ဘူး၊ မကောင်းဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ငါသိတဲ့လူတွေကတောင်အဲဒါကိုတောင်မသုံးချင်ကြဘူး၊ ငါတို့ကိုနားလည်ဖို့နဲ့ငါတို့ကိုထည့်သွင်းဖို့သူတို့ကိုလိုအပ်တယ်။
camila sobarzo အားပြန်ကြားပါ
ငါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါ wea ၏ရေဆန့်ကျင်ရေးဗားရှင်းကိုမပြန်နိုင်ပါ
Blanka GUERRA RIVERA ဟုသူကပြောသည်
ငါအသက်ဟောင်းကိုပြန်သွားချင်သော Facebook စာအုပ်အသစ်နှင့်မတူပါ။
BLANKA GUERRA RIVERA သို့ပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော် Facebook ဗားရှင်းအဟောင်းကိုလိုချင်ပါတယ် ငါ currentlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll like မကြိုက်သည်။
Eduardo ကွီတို ဟုသူကပြောသည်
ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ ကျေးဇူးပြုပြီးငါအရင် version ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲပြောပြပါ
eduardo quito အားပြန်ပြောပါ
ပြီးတော့ Facebook ကိုမကြိုက်တာကအမှန်တရားပဲ
CHANGE WELL CHANGE WELLLAN CHELL CHANGE WELLLov အပြောင်းအလဲ WELLLov အပြောင်းအလဲ WELL CHANGE WELLLov အပြောင်းအလဲ WELLLov အပြောင်းအလဲ WELLLov အပြောင်းအလဲ WELL
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် vrsion အသစ်ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ဗားရှင်းအသစ်ကိုကြည့်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမကြိုက်ဘူး။ ဗားရှင်းဟောင်းကိုဖယ်ထုတ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ငါကဗားရှင်းအသစ်ကိုတင်တဲ့နေရာမှာထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်၊ Facebook ဗားရှင်းဟောင်းကိုပြန်သွားပါ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အပေါ်မှာ Facebook ကအဲဒီအကြောင်းမပြောတတ်ဘူး၊ ငါနေရာတိုင်းကိုကြည့်ပြီးပြီ။
juan diego သို့ပြန်သွားရန်
ငါ Old VERSION သို့ပြန်သွား !!
ငါနောက်ဆုံးမှာပြန်အဟောင်းဗားရှင်းတယ် !! ငါခေါ်အုပ်စုတစုသို့ရတယ်
ထို့နောက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အောက်ရှိ (အောက်ခြေ၊ ဘယ်ဘက်) ဖတ်ခြင်းကိုဖတ်ပါ။
ငါသူ့ကိုပေးခဲ့တယ်။ သူလည်းမှော်ကနေပြန်လာခဲ့တယ်။ ငါမူကားဗားရှင်းအသစ်ကိုပေးထားပြီး၎င်းသည်မည်သို့ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုမကြည့်နိုင်ခဲ့ပါ။
ငါဘာမှမရဘူး၊ ကူညီရအောင်၊ မင်းအဘိုးကြီးကိုဘယ်လိုထားလဲလို့ပြောကြရအောင်?
သို့မဟုတ်ပိုကောင်းကျနော်တို့ facebook ကိုဖျက်ပစ်
ငါဘယ်လိုပူးပေါင်းဖို့ဘယ်လိုအခြားမသိကြပါ။ အဖွဲ့ကိုရှာရန်မေးခွန်းများ -
အနည်းဆုံးကငါ့ထံသို့ထွက်လာပါတယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများငါ့ကိုမိတ်ဆွေတစ် ဦး အဖြစ်ငါ့ကိုထည့်ပါ။
အသစ် fabook ကင်လုပ်ခိုင်းမှာကြည့်ပါ
ay up ပြောပါတယ်အဖြစ်
*** ချက်ချင်း ****
facebook ke penaaaaaaa ပါ
Clarisa labrin ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်သင်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ဗားရှင်းအဟောင်းသို့မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မျှပြန်သွား။ မရပါ။ = (
Clarisa Labrin အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ FACEBOOK ၏ VERSION အသစ်ထဲသို့ကျွန်ုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းကို Facebook မှသူငယ်ချင်းများနှင့်သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမသိပါ။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏စာဟောင်းကိုပြန်သွားလိုသောကျွန်ုပ်၏ Old VERSION သို့မကြာမီကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ထိုအရာများသည်ကျွန်ုပ်အားမပေးပါ။ ORROROSA စာမကျြနှာဖွစျကွောငျးကိုဖွင့်ရန်အနိုင်ရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါသို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤဆော့ဖ်ဝဲမှမနှုတ်ထွက်ပါကကူညီမှုအသစ်ကိုမူရင်းဗားရှင်းအသစ်သို့ပြန်ပို့ပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ဗားရှင်းအသစ်ဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ် ... ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်ကငါအရင်မူလကိုပြန်သွားလို့မရဘူး ... ¬¬
သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယောက်ျားတွေ !!!! ငါဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်ရောက်သွားပြီ၊ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... လုပ်နိုင်တဲ့အသစ်တစ်ခု!
အမှန်တရားကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကိုမတွေ့ရဘူး၊ ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ထဲကိုဝင်ဖို့မရွေးခဲ့ဘူး၊ ငါရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အဲဒီမှာရှိပြီးသားဖြစ်လို့အခုအဟောင်းကိုပြန်သွားလို့မရတော့ဘူး။ ငါကြိုက်တယ်
တစ်စုံတစ် ဦး အား၎င်းအားပြောင်းလဲခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားလေးစားမှုနှင့်ရဲရင့်မှုကင်းမဲ့ခြင်းဟုထင်မြင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုလိုချင်။ ယခုတွင်ချင်ပါသည် !!!!
တစ်ရက်မှနောက်တစ်နေ့သို့သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်သို့ပြောင်းလိုက်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးအဖြေတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်ထံ၎င်းတို့ထံသို့ပေးပို့နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းသို့ ပြန်၍ မရပါ။
ဒီဟာမေးလ်ပဲ franck_rnx@hotmail.com သင့်မှာအဖြေရှိရင်ငါ့ကိုပို့ပါ
sebastian diiaz ဟုသူကပြောသည်
ငါ link ကိုငါ့ဟောင်းနွမ်း FB သို့ပြန်သွားကြဘူး, အသစ်တစ်ခုကိုသစ်တစ်ခု .................
sebastian diiaz အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ကဲ့၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်သူတို့မပြောင်းပါကများစွာသောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖန်တီးခဲ့သည့်အရူးတစ်ယောက်သာဖြစ်သည်။ သူကတကယ့် asshole တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရာအားလုံးရှုပ်ထွေးပြီးအလွန်နှေးကွေးနေသဖြင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသူတို့သုံးစွဲသူများကိုဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
အဆင်သင့် !!! ငါ့မှာအဟောင်းရှိတယ်၊ ငါညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာခဲ့တယ်၊ ငါဘုရားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
၁။ ဒီ application ကိုဒီမှာထည့်ပါ
၂။ လျှောက်လွှာတင်ပြီးလျှင်ဤ link ကို နှိပ်၍ ရလိမ့်မည်
ငါ mk anitguo facebook ကိုလိုချင်တယ်။
Sami အဘိဓါန် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါလူတိုင်း။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်နီးပါသည်၊ ဤဖေ့စ်ဘွတ်ဗားရှင်းသစ်သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်၊ ဤရုပ်ဆိုးသည်၊ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာဟောင်းနှင့်လှည့်ကွက်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ငါစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတယ်၊ ငါ့ကိုရွံရှာစေတယ်၊ ​​စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတယ်
Jenny Milena အားပြန်ပြောပါ
ဤအရာသည်အလွန်အားပေးသည်၊ ndaaa ကိုငါနားမလည်သောကြောင့်သူတို့ကအမိန့်ပေးသည်၊
kneor an explanationnnnnnnnnnnnnn နှင့်ပုံစံသစ်ကိုပြောင်းလဲအလွန်အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်
ကျနော်တို့ Old VERSION ချင်တယ်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုလိုချင်တယ်၊ အသစ်ဟာအရမ်းဆိုးတယ်၊ အရာရာတိုင်းကို load လုပ်ဖို့ပိုကြာတယ်၊ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်၊ ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူး။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘုတ်အသစ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ သို့သော်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းသို့ပြန်သွားရန်အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ပါကပြcaseနာတစ်ခုရှိပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်ပါသနည်း ??? ငါးအားဖြင့်ငါ့ကိုကူညီပါ
Viviana Monroy ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်ကဲ့သိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကိုကူညီပေးပါ။ .. ဒီဗားရှင်းအသစ်ကအရမ်းဆိုးတယ်။ ps ကတကယ့်ကိုအစစ်အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီအသစ်ကအားလုံးထူးဆန်းတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါ။ Facebook ကတစ်ခုခုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောယောက်ျားအတွက်ဘာဖြစ်မည်နည်း :::::::::::
viviana monroy အားစာပြန်ပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုဘယ်လိုပြန်သွားရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုဘယ်နေရာကိုမှပြန်မရဘူး၊ အဲဒါကိုငါလုပ်နိုင်တာကိုမကြိုက်ဘူး
မင်္ဂလာပါ။ ငါဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်ချင်တယ်။ ဒီဗားရှင်းအသစ်ကကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းနှေးနေပုံရတယ်၊ မကြာခဏဆိုသလိုစာမျက်နှာကချိတ်ဆွဲထားတယ်၊ ရှုပ်ထွေးတယ်၊ ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး! ငါအရင်ဗားရှင်းကိုပြန်ချင်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးပါ
orribleee! အဆိုးဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးငါ antiago pleaserrr လိုမျက်နှာအသစ်ကိုစုပ်နေတယ်
guillermo de la Barra ဟုသူကပြောသည်
ထို့နောက် 'add application' ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးတော့သင်နှင့်သင်၏ Facebook xD ဟောင်းကိုသင်ထပ်ထည့်လိုပါက Guillermo de la Barra အဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုရှာပါ
သူတို့ကဒီစာမျက်နှာကိုတင်လိုက်တယ် http://www.facebook.com/profile.php?id=739474780 ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်၏နံရံ xD hahahahahahaha ကိုမှတ်ချက်ပေးလိုပါကမှတ်ချက်ပြုပါ၊ သို့သော်ပြုပါနှင့်ဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းသည် xD ကိုပြန်လည်ပို့သည်။
Guillermo de la Barra ကိုစာပြန်ပါ
heyyy အကူအညီ၊ ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်မသွားနိုင်ဘူး။ အသစ်ကကင်လုပ်စားနိုင်ပြီ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
maria claudia သို့ပြန်သွားရန်
Olga Monfort ဟုသူကပြောသည်
သို့သော်, ငါနီးပါးဘာမှမဝင်ရောက်နိုင်, ငါဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖန်တီးငါမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ပိုမိုသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ကမဝင်ရောက်နိုင်ပါ။
သူက Facebook ကိုဆက်သွယ်ဖို့ဒီမှာစာတွေမပို့တော့ဘူး။
Olga Monfort အားပြန်ပြောပါ
andrea ပျိုးခင်း ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ကမကောင်းဘူး၊ ဗားရှင်းဟောင်းကိုကြိုက်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ။ အရင်ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုဘယ်လိုပြန်သွားမလဲ။
andrea vivero အားပြန်ပြောပါ
ဒီနေ့ Facebook ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုစဖွင့်တဲ့အခါငါဟာငါကြိုက်နှစ်သက်သောဗားရှင်းအသစ်မှာပါနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပျက်လာတာကဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားနိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာမှပေါ်မလာဘူးဆိုတာပဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားရန်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်သွားရန်ပြောသောအရာငယ်လေးထဲမလာသောအခါ ... အသစ်ကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ
Paula andrea cabrales navarro ဟုသူကပြောသည်
.. ငါဒီဇိုင်းသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး !!!
အရမ်းထူးဆန်းတယ် .. နားမလည်ဘူး
အဟောင်းကအများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအဲဒါကိုပြောင်းချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်သွားလိုက်တဲ့ link ကမပေါ်လာဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ ???
paula andrea cabrales navarro အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီဖေ့စ်ဘုတ်ဒီဇိုင်းသစ်ကကျွန်တော့်ကိုအစပျိုးပေးလိုက်တာ၊ ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ အချက်အလက်အမျိုးမျိုး၊ အသုံးချမှုများစသဖြင့် ...... ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသင်ရှာမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်သွားရန်ပြတင်းပေါက်သည်ကျွန်ုပ်ထံသို့မလာပါ။ ဗားရှင်းအသစ်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းရိုက်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ မူကွဲဟောင်းသို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း။
ငါ tab ကိုရှိရာဗားရှင်းအဟောင်းမရကြဘူး
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုပြန်ရောက်သွားပြီ၊ ဒီဇိုင်းအသစ်ကငါနဲ့မတူလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ !!!!! ပိုကောင်းတဲ့အရာ၊ နည်းပညာအသစ်ကိုရှာဖွေပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်အဟောင်းသို့ပြန်မလာနိုင်သေးသောသူများအတွက်“ ဖေ့စ်ဘုတ်ဟောင်းသို့ပြန်သွား” နှင့်ဂူဂဲလ်ကိုရှာဖွေပါ။ ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာ !!!
puxaaaaa …။ ငါငါ့ဖေ့စ်ဘုတ်ဟောင်းကိုပြန်မသွားနိုင်တော့ဘူး၊ အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အသုံးပြုမယ့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမကြိုက်ဘူး။
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ အရင်ဓာတ်ပုံဟောင်းကိုလိုချင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Daniela Paz Cortes Venegas ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမုန်းတီးရန်ကူညီပါ။ qro အဟောင်း plizzzzzzzzzzz သို့ပြန်သွားပါ
daniela paz cortes venegas အားပြန်ပြောပါ
Angelo vera ဟုသူကပြောသည်
ငါကြိုက်နှစ်သက်သောဗားရှင်းအသစ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီလိုပါတယ်
angelo vera အားပြန်ပြောပါ
ငါက Facebook အသစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတစ်ခုဖန်တီးချင်တယ်
Jesus medina ကိုပြန်ပြောပါ
ဗားရှင်းအဟောင်းသို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်သွားနိုင်သည်နည်း ????????? '
priscilla diaz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်အသစ်ကိုမကြိုက်ပါ၊ ယခင်စာစောင်သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်စာရေးနေပါသည်။ သူတို့ပြောသော link မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။
priscilla diaz သို့ပြန်သွားရန်
ဖေ့စ်ဘွတ်အဟောင်းကိုဘယ်လိုပြန်ရမယ်ဆိုတာသူတို့ကူညီနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး၊ မကောင်းဘူး။ ငါအရမ်းမိုက်တယ်။ ငါဘာပို့လဲဆိုတာမမြင်ရဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူတို့မှာ application တွေ၊ ညွှန်ကြားချက်တွေအများကြီးလိုတယ်။ တန်ဖိုးရှိပါစေ !!!! !!!
OKKKKKKKK SERA မေးသင်နားလည်မည်မဟုတ်ပါ ?? မေး။ ။ Facebook အသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး။ ပြီးတော့အဆိုးဆုံးကတော့ SIKIERA ကငါ SOLOOOOO အသစ်ကိုရရှိတဲ့လူသစ်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုတင်းကျပ်စေတယ်။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ Old FACEBOOK ကိုငါပြန်လာလို့မရဘူး။ သူတို့တစ်ခုခုလုပ်နိုင်မလား။ ???
felipe borjas ဟုသူကပြောသည်
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်တွင်၎င်းကိုမကြိုက်ပါ။ အဟောင်းကိုပြန်သွားရန်လိုသော်လည်းပြproblemနာမှာထောင့်ရှိပြတင်းပေါက်မရှိတော့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အားပြန်ပေးရန် ကျေးဇူးပြု၍ လိုအပ်သည်။
felipe borjas အားပြန်ကြားပါ
အင်ဇို figueroa ဟုသူကပြောသည်
သင်သည် Facebook ကိုမဝင်လိုတော့ပါ
enzo figueroa အားပြန်ပြောပါ
Alejandro Monserath ဟုသူကပြောသည်
K သည် Shittt ငါဝင်းဒိုးကိုပေါ်လာပါဘူးတဲ့ဆွေးနွေးချက်သည်
နောက်သို့ပြန်ဆိုသည့်နေရာယခင်ယခင် AAAA သို့
NOOOO OSEA သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်
Metehella ဒိန်ခဲ ORN တွင်အိုင်ဒီ
alejandro monserath အားပြန်ပြောပါ
ငါ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာအရင်ဗားရှင်းကိုသွားဖို့အဲဒီလင့်ခ်မရှိဘူး၊ အသစ်တစ်ခုကိုမကြိုက်ဘူး ,,,,, ရှုပ်ထွေးပြီးရုပ်ဆိုးတယ် ,,,,
တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကူညီလျှင် ,,, 🙁
vaaa Facebookk သစ်သည်အလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောရှက်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်
Pedro Javier ဟုသူကပြောသည်
Pedro Javier သို့ပြန်သွားပါ
အသစ်ဗားရှင်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော ... ငါတို့အဟောင်းမှလေ့ရ
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ ... ပြီးတော့ဖြေပါ
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်ငါ Old Overs သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအားကျွန်ုပ်ထံပေးပို့သောလက်ဆောင်ကိုသာလက်ခံလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် VERSION အသစ်ကိုကျွန်ုပ်လိုချင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုလက်ခံခြင်းမပြုသော်လည်းယခုမည်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ FACEBOOK !!! မဖြစ်နိုင်ဘူး!!!
kieroooooooooooooooooo အဟောင်း faceoooooo ဒီတစ်ခုငါမကြိုက်ဘူးooooooooooooooooooooooooooooooooooooငါက yaaaaaaaaaaaaaaaaa ...... သူတို့ကပြောင်းလဲစေ xfavorrrrrrr
ပြတင်းပေါက်ငါ့ကို angua vercion မှပြောင်းလဲပစ်ရန်မထင်ထားဘူး
ဒါကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ဗားရှင်းသစ်ကိုဆုတ်ယုတ်စေသည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်ုပ်သည်လိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်းပြန်ပို့ရန် link မရှိပါ
maria paz valenzuela ရိုမန် ဟုသူကပြောသည်
maria paz valenzuela roman သို့စာပြန်ပါ
lizmara crossbowmen Marin ဟုသူကပြောသည်
lizmara ballesteros marin အားပြန်ကြားပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ဟာရှုပ်ထွေးလွန်းတယ်၊ အရမ်းရှုပ်ထွေးလွန်းတယ်၊ အဟောင်းကိုသက်သောင့်သက်သာရှိတာပိုကောင်းတယ်။
ငါကဒီအဟောင်းကိုပြောင်းသင့်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူများစွာက new.facebook ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့မှတ်ချက်တွေအများကြီးတွေ့ရင်ငါမတွန့်ဆုတ်ပါ။
Andres Fernandez ဟုသူကပြောသည်
ငါ ESOOOO နှင့်အတူဖြစ်ပျက်သောအဟောင်းကိုငါ့ Facebook FACEBOOK ကိုပြန်သွားဖို့ရွေးချယ်စရာ get ပါဘူးအမေရိကန်အဟောင်း Facebook
Andres fernandez အားပြန်ကြားပါ
ဂျင်း Pierre sancy ဟုသူကပြောသည်
ငါအဟောင်းကိုသူတို့ပြန်ပို့ရန်လုပ်သကဲ့သို့ပြန်သွားရန်လိုသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဖြေရှင်းချက်မပေးလျှင်ဤမူကွဲသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့ကအလယ်အလတ်လှိုင်းများမှအခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤဆိုင်းငံ့ထားခြင်းမှသာဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည် http://WWW.SONICO.COM ဒီရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အတူတူပင်၊ သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုသာဖန်တီးနိုင်ပြီး၎င်းကိုသင်၏ပုံရိပ်သို့ပင်ပေးနိုင်သည်။ အလားတူပင်၊ သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုသင်၏ဓာတ်ပုံနှင့်အတူသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေရန်အကြံပြုလိုသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံကိုဖန်တီးနိုင်သည်
jean pierre sancy သို့ပြန်သွားရန်
ငါအဟောင်းကိုသူတို့ပြန်ပို့ရန်လုပ်သကဲ့သို့ပြန်သွားရန်လိုသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဖြေရှင်းချက်မပေးလျှင်ဤမူကွဲသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့ကအလယ်အလတ်လှိုင်းများမှအခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤဆိုင်းငံ့ထားခြင်းမှသာဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည် http://WWW.SONICO.COM
အသစ်သော Facebook စာအုပ်ဖန်တီးသူများအတွက်
CARJOOO 100 အချိန်သွားပါ
တကယ်တော့ဒီဇိုင်းအသစ်ဟာ "HORRIBLY BAD" အရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်၊ အဆတစ်ထောင်လောက်ပိုကောင်းတယ်၊ လူအများစုကထင်ထားတာအတိုင်း ... သင့်ကိုအဟောင်းကိုပြန်သွားစေသင့်တယ်။
FB အသစ်သည်အလွန်ဆိုးရွားပြီးအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးသင်၏သူငယ်ချင်းများ၏ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်များအားလုံးကိုအတူတကွကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ သင်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်သတင်းဖြင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်ရမည်၊ သင်နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဟောင်းတစ်ခုကိုသင်ကြည့်လိုလျှင်သင် အခြားတစ်ခုကအဆတစ်ထောင်ပိုကောင်းတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ဘာကြောင့်သူတို့ဘီးကိုတီထွင်တာလဲ၊ ဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားတာငါမသိဘူး
ငါလည်း Facebook ဗားရှင်းအသစ်ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ သူတို့ကလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ထင်ရတဲ့အရာကိုသုံးဖို့သူတို့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုထားခဲ့သင့်တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ application settings တွေကမရှင်းဘူး။ ငါကအင်္ဂလိပ်ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ စပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုခြင်းသည်အလွန်တိကျ။ ရှင်းလင်းမှုမရှိသောကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ရန်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရမည်။
သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၏အယ်လ်ဘမ်များအားလုံးကိုအတူတကွကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်နိုင်သောပက်ထရီရှာသည်သင်မူလစာမျက်နှာ၏မီနူး (သို့) အက်ပလီကေးရှင်းများဖော်ပြသည့်မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်းရှိ application များသို့သွားရန်လိုအပ်သည်။ ..
မင်္ဂလာပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည့်မျက်နှာဟောင်းအသွင်သို့ပြန်သွားရန်ကူညီပေးသည့်အတွက် ENRRIQUE ။ ဤသူအားလုံးသည်ဤပြBနာကိုကြုံတွေ့ရပြီ၊ ဤ ENRRIQUE သို့ပေးပို့ရန်ဤမှတ်ချက်များအားဤတွင်ရှာပါ။
ဂျဲနီ fabiola civesres vives ဟုသူကပြောသည်
jenny fabiola vives caceres အားပြန်ကြားချက်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းမှမည်သို့ထွက်ခွာရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သူတို့က "ဖေ့စ်ဘွတ်ဟောင်းကိုပြန်သွားပါ" ဟုပြောသော်လည်း၎င်းသည်ထွက်မလာပါ။ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ..
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကိုကျွန်မလုံးဝမကြိုက်ဘူး !!!!! အခုအချိန်မှာအပြောင်းအလဲအတွက်တရားမျှတတဲ့အရာတခုခုကိုငါရှာမရဘူး။
ပရိုဖိုင်း၏ဒီဇိုင်းသည်ယခင်လိုပုံစံထက်ပိုကောင်းသည်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပုံစံကိုငါသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ယခုရုတ်တရက်အရာရာပြောင်းလဲသွားပြီးအရာအားလုံးသည်သီးခြားစီပေါ်လာသည်။
ငါကငါ့ကိုဗားရှင်းအဟောင်းဆီပြန်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။ ဒီဟာကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ အမြဲတမ်းကပ်နေတယ်၊ ​​ဘာမှမပြောင်းနိုင်အောင်ပရမ်းပတာဖြစ်နေတယ်၊ ​​ငါဘာလုပ်ရမလဲ ????
Claudia Lagos သို့ပြန်သွားပါ
Mega ရက် ဟုသူကပြောသည်
ငါ Old FACEBOOK VERSION ကိုပြန်သွားချင်တယ်။ ရှာမတွေ့နိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှာဖွေမှုက BAR …ငါ့ကိုကူညီပါ။
Mega Days သို့ပြန်သွားပါ
dayana duran စစ် ဟုသူကပြောသည်
dayana duran guerra မှစာပြန်ပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကိုအရုပ်ဆိုးလှတဲ့ pa ကချွတ်ပစ်ပါ။ နှုတ်ဆက်ပြီးအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ "ဘယ်လို" မည်သူမဆိုသိလား?
အသစ်တစ်ခုကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော wn ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါ wea စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်
ငါ link ကိုဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့မရကြဘူး, ဘယ်လိုငါပြုပါ? ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ
ဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ပြတင်းပေါက်ကိုမမြင်ရဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ ???၊ အသစ်တစ်ခုကိုငါမကြိုက်ဘူး ... ငါရှိခဲ့ဖူးတဲ့အရာကိုပြန်သွားချင်တယ် !!
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် KE FACEBOOK အသစ်ကိုအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်ကိုလေးစားမှုမရှိပါ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေသူများကိုတရားစွဲမည်
ငါဖေ့စ်ဘုတ်အသစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်ငါဟောင်းဖေ့ခ်ျကိုပြန်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကိုပြန်ဖို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘူး၊ သူတို့အဲဒီကိုရောက်လို့မရဘူး၊ ငါတို့လှူထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလဲသုံးခိုင်းတယ်။ ကြိုက်တယ်
"မူကွဲဟောင်းသို့ပြန်သွားပါ" ဆိုတဲ့လင့်ခ်ကမပေါ်တော့ပါ၊ ဒီအသစ်စက်စက်သည်ကြောက်စရာကောင်းပြီးသုံးစွဲသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါကအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်မပြုသင့်ပါ။ သင်မနှစ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပျက်စီးခြင်းကိုခွင့်မပြုပါနှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီးလမ်းဟောင်းကိုဘယ်လိုသွားရမလဲပြောပြပါ အကြံဥာဏ်ကဝန်ဆောင်မှုကိုပိုဆိုးအောင်မတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာကိုဖော်ပြလိုပါသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းသို့ပြန်သွားရန်လင့်သည်မည်သို့ပေါ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ ဒီမူကွဲအသစ်ကိုပုံမှန်ပြန်ရောက်ပုံကိုတစ်စုံတစ်ယောက်သိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ !!!!!!!!!!!!!
ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ကိုမလိုချင်ဘူး၊ သူတို့ပြောသလိုငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါမရခဲ့ဘူး၊ အရင်အဟောင်းကိုတင်ဖို့နောက်တစ်နည်းပြောပြပါ ဦး ။
ငါအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး, ငါကအားလုံးရှုပ်ထွေးထင်ပါတယ် !!
pilar တယ်လီ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းသို့ပြန်သွားရန်သူတို့ပြောသမျှကိုကျွန်ုပ်လုပ်သည်။ ဘာမှမအလုပ်လုပ်ပါ ။(
pilar tello မှစာပြန်ရန်
ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဆိုးတယ် .. ငါဖေ့စ်ဘုတ်အသစ်ကိုငါတင်လိုက်တယ်။ favorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr အားဖြင့် Antigo kiero
ကြောင်း shit ပြောင်းလဲပစ်
ငါ့အတွက်မကောင်းဘူး။ ငါနေရာလွတ်များနှင့်အက္ခရာများကိုအခြားသူများအပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ ငါ့နံရံကိုမဖတ်နိုင်၊ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေဆီကစာရေးလို့မရဘူး (သို့) သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုမတွေ့ရဘူး။ အားလုံးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပြန်ဖို့ရွေးချယ်စရာတောင်မရှိဘူး !! ကင်လုပ်ခိုင်း !!!
pz …။ ကြောင်း obcion ပေါ်လာပါဘူး: S
မကောင်းတဲ့ဟာသ !!!! အပူ ...
X ဗားရှင်းအဟောင်းသည်ပိုများသောကြောင့်ငါဒီ obcion ချင်တယ်
နှင့်လျော့နည်း lala: S က
Sofia siguelnitzky ဟုသူကပြောသည်
sofia siguelnitzky အားပြန်ပြောပါ
ယခုပင်လျှင်ဤအချက်သည်…ပထမဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော့ခကိုအခမဲ့ရွေးချယ်မှုဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်“ hi5, photolog sonico etc” ၏မျက်နှာပြင်အစား Facebook ကိုရှေးခယျြရခြင်းအကြောင်းအရင်းရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟောင်းသော Facebook မျက်နှာပြင်ကိုမရွေးချယ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အားအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးမှုရှိသည်။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ငါ Old O FACEBOOK ကိုပြန်သွားချင်တယ်။
ငါအိုမင်းခြင်းသို့မသွားနိုင်တော့ပါ။ (သို့) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလျှောက်လွှာကိုထည့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်လုပ်သော LINK ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်အိုမင်းခြင်းသို့ပြောင်းခြင်းနည်းလမ်းကိုကြားပါ။
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထင်တာကရိုသေလေးစားမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ ဒီဖေ့စ်ဘုတ်အသစ်ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေရဲ့အသံကိုမကြားမိအောင်၊ ဖန်တီးသူတွေသိထားသင့်တယ်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အဟောင်းသို့ပြန်သွားသင့်သည် (သို့) ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာကိုကမ်းလှမ်းသည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။
ဒီဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ဟာအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်၊ နောက်တစ်ခုကပိုပြီးစနစ်တကျရှိခဲ့တယ်၊ သတင်းအတွက်နေရာတစ်ခုရှိတယ်၊ နံရံပေါ်ကရေးသားချက်များအတွက်၊ ငါတို့လျှောက်လွှာတွေကိုဘယ်မှာထားရမယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ငါသူတို့ကိုငါတောင်မသုံးတော့ဘူး။ ။
ငါတို့မနှစ်သက်သောထိုဗားရှင်းကိုသင်နားလည်ရန်အခြားဘာလိုအပ်ပါသလဲ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောင်းလဲပါ…………………………………………… ..
Valeria ပြောသလို .. ငါ Facebook မှာဘာမှမသုံးတော့ဘူး .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရှာလို့မတွေ့တဲ့အရာတွေ၊
WE FACEBOOK ကိုလိုချင်တယ်။
ဒါမှမဟုတ်သူတို့အသုံးပြုသူများမရှိဘဲဖြစ်လိမ့်မည် !! : @
IO IA သည်၎င်းကိုအသုံးမပြုပါကအသုံးပြုရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးနှေးကွေးသည်။
ငါသတိပေးမျှော်လင့်ပါတယ်! ထပ်မံ AVILITATED ထွက်ခွာမည်
liliana andrea Martinez ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်းကိုပြန်လာကြစို့။ ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးအသစ်ကပိုရှုပ်ထွေးတယ်။ နှင့်အသုံးပြုရန်နေမကောင်း ..
liliana andrea martinez အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးပြုပြီး k အဟောင်းဖေ့စ်ဘုတ်ကိုပြန်သွားပါ !!!!!
XIMENA PONCE ABARCA ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာအဟောင်းကိုပြန်မသွားနိုင်တဲ့လှည့်စားမှုပဲ၊ ဗားရှင်းအသစ်ကိုကျွန်တော်မုန်းတယ် !!! ငါ့အဟောင်း FacebooK ငါ့ကိုပြန်ပေး !!! အကယ်၍ ဘဝသည်ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးပြီးသားဖြစ်ပါကသင့်ကိုယ်သင်ဘာကြောင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ရသည့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုပေးသနည်းဟုကျွန်ုပ်အားဆုံးဖြတ်ခိုင်းသည်။ ငါသာလျှင်သင်၏ "ခေတ်သစ် VERSION" KE KIERO အိုင်တီသာ။ ကောင်း၏ပုံရသည်! !! လူတွေကိုနားထောင်ပါ၊ ငါတို့အတွက်မင်းကိုသုံးမယ် !!!! နားထောင်ပါ !!!!
XIMENA PONCE ABARCA အားပြန်ပြောပါ
AAAAHHHH နှင့်ဤအရာအလုံးစုံပြီးနောက်ဒီနည်းကို CLOWN တူသောတစ် ဦး တည်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုငါရှာမရနိုင်တော့ပါ။ သင်၏ Facebook စာအုပ်ကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးအဟောင်းကိုပြန်သွားပါ။ ဒီဇိုင်းအသစ်ဟာအမှိုက်ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုကအဟောင်းကိုသုံးလာတယ်၊ ဒီဟာဗားရှင်းအသစ်ထက်အများကြီးပိုမြန်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူး။
သူ့ဟာသူ… .a ကြီးမားတဲ့ shit !!!!!
ဒိန်ခဲအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ ?? : S: S: S: S: S
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပြီးအလွန်နှေးကွေးပြီးရှုပ်ထွေးပြီးပုံပျက်မှားယွင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်ဓာတ်ပုံပြတင်းပေါက်ကြီးများကိုရရှိသည်။ ဤဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အဟောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်သူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်ဂူနာတွင် ဦး ခေါင်း၊ ခြေထောက်မရှိ၊ အားလုံးပြုပြင်ခြင်းမရှိ၊ အဲဒါကိုမှာထားတယ်၊ ငါဘာလုပ်နေလဲ၊ ငါမက်ဆေ့ခ်ျတွေပို့ထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ငါးဖမ်းတာမဟုတ်ဘူး။
ငါ hi5 ကိုပြောင်းပါမယ်
ဗားရှင်းအသစ်ကိုနှစ်သက်သူမည်သူမဆိုကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့သေးပါ၊ ၎င်းသည်ဖန်တီးသူများ၏စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဆာဗာများကိုနှင်ထုတ်ရန်ကောင်းစွာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်သည်။ hi5 သို့ပြောင်းပါ။ ဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိအားပေးမည်၊ သုံးစွဲသူသန်း ၅၀ သည်အမှန်ပင်ရိုက်နှက်လိမ့်မည် အဲဒါကိုဖန်တီးသူတွေ၊ ခင်ဗျားမထင်ဘူးလား။
ငါအဟောင်းမျက်နှာစာစာအုပ်ကိုပြန်သွားဖို့လိုသေးတယ်။ အသစ်ကအသစ်တစ်ခုကိုငါမှမကြိုက်ရင်၊ ငါဘယ်လိုလဲမသိဘူး၊
Yapo သည် beb ရမှတ်များနှင့်ဟောင်းနွမ်းသော Fb သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုပြောပြသည့်စမတ်သူဌေးဖြစ်သည်
လူကြီးလူကောင်းတွေပြောတာကသူတို့ဟာညာဘက်အပေါ်ပိုင်းမှာဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့လျှောက်လွှာတင်ထားတယ်၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ သူတို့ပြောတာတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူး၊
NOHEMY ခြင် Canelon ဟုသူကပြောသည်
Old FACEBOOK သည်အထက်ပါ PASSY ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ သူတို့သည်၎င်းတို့သည်ထူးခြားစွာဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ Old FACEBOOK သို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် FACEBOOK ကိုအောက်ပါအတိုင်းလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အခြားအစီအစဉ်များမှာမူ။
NOHEMY MOSQUERA CANELON သို့ပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ အစပိုင်းမှာအမှန်တရားကိုကျွန်တော်မထည့်ခဲ့ဘူး၊ အခုတော့အမှန်တရားပဲ။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ဗားရှင်းအသစ်နဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်တာကဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်သွားချင်ပေမယ့်ဘာမှမပေါ်လာဘူး ငါ pleessssssssssss (Bis) meeeeeeeee ငါကူညီသကဲ့သို့ငါဖြစ်စေ plisssssssssssss ....... ။
အသစ် faebok nik နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ
နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ iq ဘာမျှမတူပါ NOTHINGAAAAAAAAAAAAAA
WE FACEBOK အဟောင်းလို!
ငါနားမလည်လို့ဘာမှမလုပ်နိူင်ဘူး၊ သူတို့လုပ်နေတာကဘယ်သူမှအသုံးမ ၀ င်ချင်ဘူး။ ဘယ်သူမှမဆုံးနိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအသုံးမ ၀ င်တာ၊ ငါကပြားတယ် ပိတ်လိုက်မယ်
တစ်ယောက်ကအဲဒါကိုတောင်ဝင်လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါသူတို့မကြိုက်ဘူး။ သူတို့ဟာ home page nio mass change ကိုအမြဲပြောင်းနေတယ်။
Axel F ကို ဟုသူကပြောသည်
အဆိုပါ penka ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို
link ကို kitaron
နောက်တဖန်ဒါဟာ porkeriaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Axel F ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ GODSSSS, WINDOWS 95 သို့ပြန်သွားချင်, သင်အဘယ်ကြောင့်အိုင်တီ OFF ယူ ???
ငါ cassettes, lps နှင့် 8-tracks များသို့ပြန်ချင်ပါသည်။ pleaserrrr၊ ကျွန်ုပ် CD များမကိုင်တွယ်နိုင်ပါ၊
သူတို့ကခေတ်မီဆဲလ်ဖုန်းတွေကိုယူသွားတယ်၊ ငါသူတို့နားမလည်ဘူး ... ဘီးနဲ့နံပါတ်တွေနံပါတ်ပေးလေ့သုံးခဲ့တဲ့ဒိုင်နိုဆောဖုန်းအဟောင်းကိုလိုချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကပိုပြီးရိုးရှင်းပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့နံပါတ်တွေကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုတော့ခေါ်ဆိုမှုကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။
ငါပလာစမာရုပ်မြင်သံကြားစက်ကိုအမြန်ဖယ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်၊ အဖြူ၊ အဖြူရောင်တီဗီလိုတယ်၊ အသစ်တွေကကျွန်တော့်တည်ရှိမှုကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်၊ ​​သူတို့အားလုံးအတူတူပဲ။
ငါအင်တာနက်ကိုဖျက်ပစ်ရန်သူတို့ကိုငါလိုအပ်တယ်၊ ငါ့ကိုမီးခိုးအချက်ပြမှုများပေးပို့ရန်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့သည် !!!!
ငါအရာရာပြောင်းလဲသွားတာကိုမုန်းတယ်၊ သူတို့ဘာကြောင့်ငါအမြဲတမ်းတိုးတက်ဖို့နဲ့ငါခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ငါ့ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတာလဲ။ ငါသူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲပစ်သွားကြသည်ဆိုပါကအဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ခုခုသင်ယူဖို့လိုအပ်သလဲ
ငါ့အာရုံခံဆဲလ်တွေကိုအရည်ပျော်စေတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုငါမုန်းတယ်၊ ငါဟာအမှားအယွင်းတစ်ခု၊ ဘုရားသခင်ဆီက morona ပါ၊
ငါ veraaaaaaaaa အသစ်ကိုမလိုချင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မျောက်မျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသောဗားရှင်းဟောင်းကိုလိုချင်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုလူတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါ့မလားဟုမည်သူမျှမမေးခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်ရန်နှင့်အဆင့်အတန်းမမှီရန် !!!!
ညံ့ဖျင်းသော Faavoor ကြည့်ရှု Loos Suupliicoo
Caambiieen အဆိုပါ Faaceebook Pliis Pliis
The Nuueevoo Is Orriiblee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤဖိုရမ်၌တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများစွာရှိပါကကျွန်ုပ်၏တာဝန်ရှိသူများသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများထံကျွန်ုပ်ပို့လိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်၏လက်ခံမှုသည်မည်သို့မည်ပုံလက်ခံနိုင်မည်နည်း။ Facebook သည်ကျွန်ုပ်၏အပေါင်းအဖော်များသို့ကျွန်ုပ်ရေးသောအရာများနှင့်အမြဲတမ်းငါ့ကိုလှောင်ပြောင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါကကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါသင်ထည့်လိုက်တဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းကိုဘယ်နေရာမဆိုပြန်သွားလို့မရဘူး။ ဗားရှင်းအသစ်ကိုငါမကြိုက်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိလူများရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ၎င်းကို ထပ်မံ၍ အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ကျွန်ုပ်သည် privacy အတွက် configure လုပ်သည့်အခါ၎င်းအလုပ်ကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးဤ wueeee ကိုကျွန်ုပ်၏ facebook တွင်သိမ်းထားပြီးသူငယ်ချင်းများကိုမရှာဖွေနိုင်ပါ။
Nohemy ဗလီCanelòn ဟုသူကပြောသည်
ဒီနည်းလမ်းသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အငြင်းပွားစရာမရှိသောအသုံးပြုသူများထောင်နှင့်ချီသောကြောင့်ဒီ FACEBOOK အသစ်နှင့်အငြင်းပွားစရာမလိုပါ။ မည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးမပြုပါ။ အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အိုစာဟောင်း FACEBOOK သို့သွားရန်သင်ပေးသောလင့်ခ်များသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
Nohemy Mosquera Canelònအားပြန်ပြောပါ
အဆက်အသွယ်အထက်တွင်ရေးပါ၊ သူငယ်ချင်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ သူမရေးခဲ့သည့်တစ်နေ့တွင်သူမအတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
Mario Herrera Cruz ဟုသူကပြောသည်
တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည် Facebook စာအုပ်ကိုဖျက်ပစ်ရန်သွားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဖိအားပေးခံရသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် OSEA ကိုငါဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်ကိုကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့မမြင်ရပါ၊ ကျွန်ုပ်ကူညီရန်လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုစာရေး။ ရေးသားနိုင်ပါသည်။ Facebook သို့မဟုတ် MY HOTMEIL မှထာဝရကျေးဇူးတင်ပါတယ်
mario herrera cruz အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိုဖိုင်ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့ပြန်ပို့ရမည်ကိုသိသော်လည်း၎င်းသည်တကယ့်ခြေလှမ်းများဖြစ်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟေ့ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ဗားရှင်းအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး။ အားလုံးကိုဖွင့်လို့မရဘူး။ ပရိုဖိုင်းပုံကိုပြောင်းလို့မရဘူး။ facebook pro မင်းအရင်ပြူတင်းကိုပြန်သွားနိုင်အောင်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ့်ပြတင်းပေါက်လေးကိုငါမမြင်ရဘူး။
ငါ Old FACEBOOK ချင် !! ငါ့ကိုကူညီပါ !!!! ... -.- `ပြောင်းလဲပစ် LOOOO
ကျေးဇူးပြု။ ငါလုံးဝအော်ဟစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါမင်းကိုငါ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တချို့ပို့ပေးချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့အဟောင်းတွေကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲကို ၀ င်ရောက်နိုင်ဖို့ပြတင်းပေါက်ငယ်လေးမရှိရင်အဲဒါကိုငါကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
NOHEMY MARGARITA ခြင် Canelon ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီ GACEBOOK ကိုမကြိုက်ဘူးအချိန်ကာလများစွာစဉ်းစားခဲ့သည် ... ဒီထက်ပိုသည်, ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုဖြုတ်ချပြီးကတည်းကသူတို့အိုင်တီ install လုပ်ခဲ့ ... ငါထောင်ပေါင်းများစွာအချိန်အဟောင်းတစ်ခု, ဒါပေမယ့်ငါပေးဖို့ငါကြောက်တယ် သူတို့ကသူတို့ပြောတာကတော့သတင်းအချက်အလက်တွေကငါ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ် ... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုမပေးတဲ့အသုံးပြုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုမကျေနပ်ကြတာမို့ဒီပုံကိုအရင်မသုံးပါနဲ့ ဓာတ်ပုံများ၊ စသည်တို့ကိုအယ်ဘမ်များ၊ အသစ်။ ကျွန်ုပ်တို့အသစ်ထဲတွင်ဘာကိုတွေ့ရသနည်း။ ကျွန်ုပ်အဆိုပြုထားသည့်အတိုင်းရရှိရန်နည်းပညာကိုအလွန်တိုးတက်အောင်လုပ်သည်။ ငါ့ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
NOHEMY MARGARITA MOSQUERA CANELON အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
q အဟောင်းကို fb ပြန်သွားပါ။ !
ယခုပင်လျှင်သင်ပေးခဲ့သည့်အရာများသည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောဟောင်းနွမ်း Facebook စာအုပ်ကိုပြန်လည်ယူရန်အမေရိကန်ထက်ပိုမိုထိရောက်သောအချက်အလက်များ၊ အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ ...... သင်ကနည်းပညာရှင်တွေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကို OUT ONE နဲ့အတူ AUTOMO ONE မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ခံထားရသောဗွီဒီယိုဖိုင်များစသည်တို့ပျောက်ကွယ်သွားသည်…ထိုအချိန်သည်ယခုအချိန်တွင်ဤအသစ်သော FACEBOOK သည်သူ၏အားနည်းချက်ကိုပျောက်ကွယ်သွားစေပြီ…ထိုအရာသည်အခြားတစ်ခုရှိခဲ့သောရွေ့လျားမှု………။
ငါဗားရှင်းအဟောင်းငါ့ကိုကူညီရှိသည်အဖြစ် link ကိုမထွက်ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး
ဓာတ်ပုံများမှမှတ်ချက်များသတင်းသည်ပင်မစာမျက်နှာသို့ရောက်သောအခါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကို tag လုပ်သောအခါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး သည်အုပ်စုနှင့်ပူးပေါင်းသောအခါသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုပန်ကာဖြစ်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်ကြိုက်ခဲ့သည်။
ဒီလှပတဲ့ FACEBOOK အသစ်အကြောင်းကျနော့်အမြင်ကိုရေးဖို့စိတ်ကုန်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့် US ဘယ်သူမှဘယ်သူမှနားမထောင်ကြလိမ့်မယ်၊ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဆန့်ကျင်တဲ့အရှေ့တောင်အာရှဆီသို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအားလုံး FACEBOOK မှာရှိနေတဲ့တခြားအစီအစဉ်တွေဆီကို SONICO အတွက်ငါအကြံပြုချင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုရန် - ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုမကြားသောကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ
အဘယ်သူမျှမမီတာပေါ်လာ !!!!!!!!! ငါမျက်နှာဟောင်းကို ပြန်၍ မသွားနိုင်ပါ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
သူတို့ကကျွန်မတို့ကို faceeeeeeeee ကနေထွက်ခွာခိုင်းတယ်။ !!!!!!!!!! တစ်စုံတစ် ဦး သည်မည်သို့ပြန်လာရမည်ကိုသိလျှင်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။
ဒီနည်းနဲ့ကိုက်ညီတာကပိုကောင်းတဲ့အဟောင်းမျက်နှာစာစာအုပ်ဆီပြန်သွားဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြာပြီလား၊ ဒါပေမဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး………………။ အဟောင်း။ သူတို့တကယ်အများကြီးပျက်စီးပါပြီ
yaaaaaa ဖေ့စ်ဘုတ်အဟောင်း !!!!
ကောင်းပြီ၊ ငါ Facebook အသစ်ကိုမကြိုက်တော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေတောင်မှမတွေ့ဘူး
သင်နှင့်အတူ k falal အခြား mmmmmmmmmmm နှုတ်ဆက် mioi ထားပါ
ကောင်းပြီ၊ သူတို့ထိုက်သင့်တဲ့ရိုသေလေးစားမှုတွေနဲ့ ... ဒီရွေးချယ်မှုက Facebook ဗားရှင်းအဟောင်းကိုပြန်ဖို့ငါမထင်ပါဘူး၊ ဒီအသစ်ဟာအတန်ငယ်မနှစ်မြို့စရာကောင်းလို့ပါ။
အသစ်ကတဦးတည်းငါ anythingaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa နဲ့တူမကအရမ်းဆိုးရွားဖြစ်ပါတယ်အဟောင်း facebook ကိုပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လိုပြောပါ။
ငါ naaah များအတွက် nuw မျက်နှာမကြိုက်ဘူး ... ။
နှင့် amts အဖြစ်ပြန်သွားဖို့ဘာမျှမငါ့ထံသို့တက်လာ !!
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင် version ကိုရှိသေးတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမတိုင်ပင်ဘဲအဲဒါကိုချမှတ်လိုက်တာလား။
ရုတ်တရက်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဗားရှင်းအသစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ အမှန်တရားကဘာမှမရှိဘူး။ ငါ့လျှောက်လွှာတွေတော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားတယ်။
သဘောမတူကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်၊ သို့သော် ps ကျွန်ုပ်သည်စီမံခန့်ခွဲသူများမှ၎င်းတို့၏အကောင့်ကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် developer များအတွက် buuuuu နှင့်သူတို့သည်းမခံခြင်းနှင့်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း
Nohemy ဗလီ Canelon ဟုသူကပြောသည်
အမှန်တရားကတော့ဟောင်းနွမ်းနေပြီ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်။ သူတို့လုပ်သင့်တယ်ဆိုရင်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်စီကိုသူတို့လိုချင်တာကိုမေးရမယ်။ ဒါပေမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ လက်ရှိအလုပ်ဟာမကောင်းဘူး၊ ဒါပေမဲ့မကြာခဏစိတ်မကောင်းပါဘူး ၎င်းမှာအမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှစမ်းကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်အဟောင်းကိုလွှဲပြောင်းပါက ... ဖိုင်အသစ်တွင်ကျွန်ုပ်ရရှိထားသည့်ဖိုင်များပျောက်ဆုံးသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်လက်ရှိဖိုင်ကိုထားခဲ့ခြင်းက၎င်း၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Nohemy Mosquera Canelon အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ မျက်နှာအသစ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး၊ အဟောင်းကိုဘယ်လိုပြန်သွားရမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ အစစ်အမှန်အဆင့်တွေလိုလို porf ။
ငါ့ထံသို့ဘာမျှမပေါ်လာပါဘူး။ ငါအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး !!!!
ဘာမှမပေါ်လာပါဘူး။ ငါအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး !!!!
Heidi chevez ဟုသူကပြောသည်
ငါအသုံးမပြုတော့တဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာမရှိပါဘူး helpooooooooo ………………………
Heidi Chevez အားပြန်ပြောပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ဟာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါ။ သူငယ်ချင်းတွေစာရင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ၊ ငါဘယ်လိုပြန်လည်ရယူနိုင်မလဲ၊ သူတို့မလုပ်နိုင်တာတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေအားလုံးကိုအမျိုးအစားအလိုက်စီထားတယ်၊ နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ရတယ်၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူတို့ဟာကြီးလေးတဲ့အမှားတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိလို့ပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဟောင်းသို့ပြန်သွားပါကစိတ်မ ၀ င်စားပါ။
က unaaa vergaaaa !!!!
တစ်ယောက်ယောက်ကတစ်ခုခုသိရင်ဒါမှမဟုတ် kee mee sayaaa !!!
အဘယ်ကြောင့်သူတို့အရင်ကဲ့သို့ပြန်မထားဘူး ... ဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ပါသည် ...
နှင့်ငါပြthatနာနှင့်အတူတစ် ဦး တည်းသာမဟုတ်ပါဘူး
သူတို့လုပ်ခဲ့သောဤအပြောင်းအလဲသည်ဆိုးရွားသည်၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုဗွီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်ကြိုတင်ပုံစံဖြင့်လုပ်သည်အဘယ်မှာကျွန်ုပ်ရှာဖွေရမည်နည်း။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့၏ဗီဒီယိုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားအသုံးပြုသူအားလေးစားသင့်သည်။ …………………………………………………………………သူတို့ကိုကျွန်ုပ်ကိုပုံစံသစ်သို့ပြန်သွားပါ၊ သူတို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။
သူတို့သည်အဟောင်းကိုပြန်သွားရန်အကြံပြုပြီးသူတို့ပေးသောအရာသည်အလုပ်မလုပ်ပါကကျွန်ုပ်ရယ်သည်။ သူတို့ဆက်ဖြစ်နေပါကကျွန်ုပ်သည်ဤစနစ်တွင်နေရန်အချိန်အနည်းငယ်ပေးသည်။ …သူတို့ကအယ်လ်ဘမ်များနှင့်မိသားစုဝင်များဗီဒီယိုများပါသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားလေးစားခြင်းမရှိကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါမရကြဘူး !!! အဲဒီပုံမှာငါဘာတွေ့ရသလဲရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အထက် Staria မဟုတ်လား Bueh ငါကြည့်ရှုငါမရကြဘူး !!! ဟုတ်ကဲ့၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။ ????
ကောင်းပြီ၊ ငါဘယ်နေရာညာဘက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာငါမသိဘူး။ ရှာဖွေရေးအကွက်ဘေးမှာသူတို့ပြောတာကငါပထမ ဦး ဆုံးကြည့်လိုက်ရင်ရှာမတွေ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်ငါရှာမတွေ့တာလဲငါ့ကိုမပြောတာလား။
ဤပုံစံကိုမိတ်ဆွေများအကြိုက်တွေ့နိုင်သည်။ ဤရှေ့ပြေးပုံစံကိုကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ......... ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသစ်ဟာအရမ်းကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေတယ်၊ ​​အကယ်၍ မင်းကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပြန်ပေးရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းသို့ပြန်ပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဓါတ်ပုံများကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ မရပါ။ အသစ်တစ်ခုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်ရပါမည်။
ပြန် oldooooo urgenteeeee သွားပါ
ဖေ့စ်ဘုတ်အသစ်ကိုရောက်သွားတယ်၊ ငါ peye de face နှင့်အတူဆက်လက်ထက်အကောင့်ဖျက်သိမ်းရန်သာ။ ကောင်း၏ထင် ...
ငါမျက်နှာအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး + ငါတို့ကအခြားတစ်ယောက်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လို့သူတို့ပိုက်ဆံနဲ့ဖောက်သည်ကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်
maryori pineda ဟုသူကပြောသည်
maryori pineda အားစာပြန်ပါ
Facebook အသစ်ဟာ garcha ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ pils များကိုမထည့် ထား၍ အဟောင်းကိုပြန်ရောက်လာပြီးဘောလုံးများကအနည်းငယ်ကွဲထွက်သွားသည်။
alvaro က de la vega ဟုသူကပြောသည်
wea culiada conchetumadre¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡တောက်ပသည်မဟုတ် - ငါဟောင်းကိုယခုကန့်သတ်ရန်ပိုနှစ်သက်သည်။
alvaro de la vega သို့ပြန်သွားပါ
အဘယ်သို့ငါငါ့ antiwo မျက်နှာ
ummm အသစ်က sooo ရုပ်ဆိုးသည်
iia noO ကျွန်ုပ်၏စာများအားလုံးကိုရရှိသည်
မျက်နှာအသစ် pichachu = (
maria dl မတ် ဟုသူကပြောသည်
awwww 'HELP ကျွန်တော့်မျက်နှာဟောင်းကိုလိုချင်တယ်
ငါ၏အသတိပေးချက်များကိုကြည့်ပါ = '(
maria dl mar သို့ပြန်သွားရန်
ငါဒီမျက်နှာအသစ်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ အဲဒါကငါ့ကိုလိုချင်တာကိုပရိုဖိုင်းမှာရေးဖို့ခွင့်မပြုဘူး၊ အဆုံးမှာတော့ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့အုပ်စုအားလုံး မှလွဲ၍ စာမျက်နှာများကိုသာပြသည်။ ယခင်ငါကြည့်ချင်သည်။
mariano amodey ဟုသူကပြောသည်
mariano amodey အားပြန်ပြောပါ
ဒီဘားဘယ်မှာလဲ၊ ငါမမြင်ဘူး၊ ကြည့်ချင်တယ်ဟောင်း D = !!!
ပိုဆိုးတာက ... ငါမရနိုင်တော့ဘူး ... သူတို့ပြောတာကိုငါမကြိုက်ဘူး၊ သူတို့ပြုပြင်နိုင်ရင်နမ်းပါမယ်
ငါ sacowea ကိုမင်းရဲ့အစေခံချင်တာကိုဘယ်လိုပြောပြောဒီ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ရက်ကိုကြည့်ပါ
ငါဟောင်း manoooooooooooooooooooooo ရင်ဆိုင်ရချင်တယ်ဒါမကြိုက်ဘူး
miiriiiamm annet ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
POOORFAAVOOOORR! loaan poosiiblee agaannnn!
YAAAAAAAAAAAAA! noo ကအတူတူပါပဲဒါမှမဟုတ် facee siin laa
မူကွဲ ANTERYOORR eraa more ORYYGYNAL && NICE
miiriiiamm annet အားပြန်သွားပါ
ပရိုဖိုင်းသည်အလွန်ဆိုးဝါးသောအမှန်တရားကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်မရရှိနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ကိုမရရှိပါကအဖြေတစ်ခုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်၊
ငါမုန်းတယ်ငါမုန်းတယ်! kboeero အဟောင်း fboooo 🙁စင်တီမီတာငါထပ်မံooooooထားသလဲ ?? 🙁အကူအညီ
သင်လုပ်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်မိနစ် (၁၀) မိနစ်ခန့်အတွက်ငွေစာရင်းကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းပြန်ဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်သွားရန် IT ပြန်သွားရန် AS
ငါ့ facebook ကိုအဟောင်းoooooသို့ canbio သကဲ့သို့ဤ orribleeeee ပါ! ဒါပေမယ့်ရုပ်ဆိုးသူတို့မွမ်းမံနိုင်ဘူး!